Qualities ka-Elikhulu Lawyer - Ezi qualities kuzakwenza nefuthe
Kukho numerous peculiarity ukuba yenza ngempumelelo lawyer
"Ezona zinamandla indlela ukuphumelela i-isiphumezi-miyalelo ngu-ngu ecela imibuzo, unako ukwenza abantu bona flaw kwi-logic ye-umchasi."Elikhulu lawyer zenza isinye abo ngokufanelekileyo kuthatha uxanduva lwakhe umxhasi ke kunjaloUkusebenza njengoko a lawyer ibandakanya i-isebenziseke kwemichiza isishwankathelo isemthethweni theories kwaye ulwazi ukusombulula ethile individualized ingxaki. Kubalulekile zonke malunga njani innovative yakho kweenkonzo isemthethweni inkonzo ingaba. Yintoni nomgangatho ofikelelwayo ukuze uphumelele kwi-isemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke. Nazi ezimbalwa qualities ukuba kufuneka iqwalasele babe elikhulu lawyer: I-Code of Elinolwazi Nobuntu ka-abaqondisi-mthetho yi isixa yamkelwa-siseko, apho usebenza njengoko izikhokelo ukuba abaqondisi-mthetho ngexesha ngumsebenzi wabo. Ezi nqobo basemazweni ukuthobela jikelele-siseko elinolwazi nobuntu ye Bar. I-lawyer izimele usenza yakhe izibophelelo kwaye umele hayi makhe yakhe personal inzala okanye yomnye umntu impembelelo kuye ukuphumeza yakhe obligation ukuba umxhasi. A lawyer ngu obliged musa ukuvumela na ukwaphulwa komthetho wakhe ukuzimela. Umxhasi kufuneka ube ukukholosa okanye trust ngomhla wakhe lawyer kwaye lawyer, kufuneka ngokwaneleyo umthamo ukuze bazuze len yakhe umxhasi kwaye oku kusenokwenzeka ukuba kwenzeka kuphela ukuba lawyer ubani personal isidima, imbeko, kwaye nasengqondweni. Kuyinto esa kundoqo kwaye kwalomgaqo-siseko ilungelo kwaye obligation ye-lawyer. Ngaphandle-siseko reliability, kukho izakuba kokuthenjwa kwaye trust phakathi lawyer kwaye umxhasi. Esi-siseko alikho ixesha limited kwaye kuya kwenziwa ukuba naluphi na ulwazi ukuba lawyer ingaba kwaziswa yi-umxhasi kwi-usenza yakhe esemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke. Esi-siseko restrains i-lawyer ukusuka indulging ngokwakhe ngamanye khondo lobungcali-mfundo lilonke okanye imisebenzi kwesihloko esingekhoyo idibene ne-a isemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke kwaye ingaba violating yakhe isidima, ukuzimela, njalo-njalo. I-lawyer ayikwazi akwazi ukufikelela kwinani ngokwakhe okanye jonga i-personal ukwazisa uwonke-wonke kwi-i-ezingafanelekanga hlobo. Akanako ukwenza nawuphi na advertisement ukufumana ngakumbi abaxhasi kubalulekile prohibited kwaziswa ngomhla wakhe iwebhusayithi amagama abaxhasi okokuba baba bemelwe i-lawyer.
I-lawyer ulindeleke ukuba asebenze kwi-inzala yakhe umxhasi. Umele ufake inzala phambi kokuba Inkundla Omkhulu lawyer ingaba omnye othe uxanduva ukuqinisekisa ubulungisa bakhe umxhasi, yena hayi kuphela ukuqonda meko kodwa kanjalo izikhokelo yakhe umxhasi ngokusebenzisa inkqubo esemthethweni.
Unguthixo omnye ngubani onako lula ukwenza zonke neeyantlukwano wakhe umxhasi ke kunjalo.
Omnye kufuneka wazi wonke umthetho (ingakumbi kule ndawo ikuyo isebenza), kubekho nto ke leyo skipped. Ukuba abe mkhulu lawyer animelanga ukuba underestimate inkqubo yokubhala izakhono ukuba ziyafuneka. Abaqondisi-mthetho ukuchitha elikhulu yaba zabo ixesha kwi-filing pleading kunye namanye amaxwebhu kunye inkundla. Usondele ngakumbi sifuna ukwenza okulungileyo indawo yakho umxhasi ukuba unayo elungileyo yokubhala lwezakhono. Yakho pleading kufuneka ziqulathe zonke jikelele imigaqo zinikwe ngezantsi: Wonke lawyer iimfuno a ngakumbi experienced umntu ukuba isikhokelo kuye kwaye kuyimfuneko ukuba abe elikhulu lawyer, ngaphandle na efanelekileyo isikhokelo awukwazi ubeke ngokwakho kwi qualitative umsebenzi, kwaye oku kuya kukunceda kuyo imizamo yakho meko kwi-uninzi exabisekileyo hlobo.
Babe elikhulu lawyer kufuneka zibe ngaphezulu polite, nomonde kwaye respectful ngakulo umxhasi wakho, Umgwebi, nabo, inkundla abasebenzi njalo-njalo.
Yakho professionalism kuxhomekeke njani kaloku ngokwakho entendelezweni, kufuneka kuba kakhulu careful kwiintlanganiso yakho ukuziphatha. Yakho ukuziphatha limele yakho personality, kuba mkhulu lawyer kufuneka bafunde njani umthetho kwaye react ukuba iimeko ezahlukeneyo. Kuba isemthethweni practitioners, ihlale kuthatha komnye umgangatho ukubaluleka. Njengokuba elinolwazi, umele ufune ukugcina ephezulu esezantsi ye honesty, imfezeko, isidima yakho dealings. Musa disclose ulwazi kunikwa kuwe nge-umxhasi wakho, uyakwazi anike ulwazi enkundleni apho kuyimfuneko kuphela kangangoko kufunwa ukuba senze njalo. Wonke urhulumente sele a ka-misela imithetho ukuze alawule a lawyer ke ukuziphatha. Qiniseka ukuba uza landela le migaqo ngenye indlela uyabaleka umngcipheko ekubeni disciplined, ekusenokwenzeka ukuba iziphumo a ulwandiso okanye revocation yakho yephepha-mvume. Ukuba ulwaphulo-mthetho sizibophelele nguwe, hayi kuphela uza kuba ngokulawulwa esangezelelweyo kodwa kanjalo elinolwazi misconduct. Kuxhomekeke uhlobo a ulwaphulo-mthetho, uyakwazi wawulahla umphefumlo wakho umsebenzi kakhulu. Ukuba abe mkhulu lawyer akuyomfuneko kufuneka earn ezintandathu amanani. Ngoko ke kufuneka enze ngokwakho eyona ngalo umsebenzi wakho, ilungiselelwe lonke uhlobo imeko. Kuba a lawyer kwi ngaye wonke umntu unako rely phambi handing phezu zabo meko. Kukho abaqondisi-mthetho abo cinga ngokwabo ngempumelelo xa besiba a iqabane lakho ngalo high-powered Umthetho Ifemi, ezinye zi ndonwabe kwivangeli ngokuphila zabo solo iindlela ezilungileyo, ezinye cinga non-inzuzo okanye yoluntu, inzala umsebenzi kuba iqhosha impumelelo.
Kwi end, omnye uya kuba mkhulu lawyer othe ukubangcwaba ngokwakhe kwi-amatyala nguye nomngeni kunye kwaye nokuchaza, ukuhlola kwaye ke conclude.
Funda indlela vumelani yiya ka-usamuel kwaye phatha ngayo qho ngemini umhla qho. Oku inyathelo lesi-kuzakuvumela ucinga ngakumbi calmly kwaye ngokucacileyo eya kuba kakhulu fruitful kuba yakho career. Kuba passionate ngakulo yakho career, enjoying yakho khondo lobungcali-mfundo lilonke uphumelele khange kuvumela ukuba uzive burdened kwaye uza ukufunda lonke ixesha kukho into entsha kunye yakho amava, zange regret yakho oyikhethileyo. Olukhulu lawyer zenza isinye abo inika yakhe anamashumi yakhe khondo lobungcali-mfundo lilonke ngaphandle na hesitation kwaye uloyiko ngaphakathi.
Ukugcina irekhodi le imibuzo ofuna buza, amanqaku ufuna ukubeka kwi-isiphumezi-miyalelo kwaye iinyaniso ubungqina kubo ngendlela yovavanyo stencils.
Ilungiselela a yovavanyo stencils sesinye ibaluleke kakhulu imisebenzi iqulathe zonke izinto ezo kufuneka ngexesha linge. Yakho stencils kufuneka zibonakalise ezithile yokuba zilawulwe kwetyala. Inkqubo yovavanyo stencils kufuneka ziquka: Xa ufuna ifayile ezifunekayo namaphepha angama-enxulumene yakho kunjalo, uza ubuso a inani deadlines. Xa kunjalo ngu weva ngelizwi jury uya kuxelela yakho umchasi yintoni ubungqina kuwe ungeniswa e linge. Yenza efanelekileyo izikhumbuzo ezi deadlines kwaye omkhulu lawyer musa unobuhle ukuhlangabezana ngamnye kubo. I-numerous kwinto ukuba elikhulu lawyer kufuneka kuvavanya ukuze ukuphumelela. Kufuneka isicwangciso ozayo ngenyameko ukuze uqinisekise ukuba uyakwazi kuvavanya yonke enye into yakho meko, kwaye kufuneka bakwazi disapprove iziqalelo ze yakho umchasi. Uyakwazi sifunise apho ubungqina ziya kukunceda ukuba kuvavanya iinyaniso.
Imithetho ubungqina siya kwalatha ukuba ngaba ethile uxwebhu, i statement admissible entendelezweni okanye hayi.
Kufuneka ube ukulungele kunye ngokwaneleyo uphando ukuze uqinisekise ukuba uza kwazi ukuba anike ubungqina ufuna ukuphumelela. Kufuneka na uphazamiseko - umchasi kwaye ingakumbi umgwebi Uza kufumana nethuba amele ngokwakho ngoko ke, yiba nomonde kwaye umamele opposite iqela ngenyameko. Mooting ufumana i-ntetho nto lomlomo kwenziwa neenkqubo zomthetho imiba okanye iingxaki phambi ijaji ngokuchasene i-opposing ingcebiso. Kubalulekile i-extracurricular umsebenzi kwenzeka umthetho esikolweni. Yona ikunceda ekwakheni ukukholosa kwaye uncedo ukuze sazi njani ukuba ikho ityala phambi komgwebi. Ukuhlekisa iimvavanyo anike omkhulu ithuba sifunda yakho iimpazamo phambi wokuba a lawyer. Ezinye iingcali uvumelekileyo ukuba kubalulekile ngokwaneleyo ukuba ibe okulungileyo lawyer. Apho inyaniso yeyokuba ngayo ngokulula ayi eyaneleyo kwi-namhlanje ke, kwimeko yesi-kuba nje elungileyo lawyer. Olukhulu lawyer kubaluleke ngakumbi creative, expressive, kwaye zange phazamisa yakhe umchasi nomgwebi. Unabo i-nako ukuba logically, soloko benze okulungileyo zophando, kwaye sele analytical ubuchule. Uyazazi njani ukuseka elungileyo ubudlelwane kunye inkundla nezinye imizimba uze ugcine yakhe isidima. Kuyimfuneko, thembeka inkundla, nabo, kwaye abaxhasi Olukhulu lawyer owaziyo kakuhle kakhulu njani umbuzo ingqina uze ugcine eziphezulu inqanaba zokuziphatha.
Kwi-Eba i-China Lawyer - China Umthetho Hetalia
Bangena eyona umthetho esikolweni uyakwazi, hayi kwi-China
I-american kwaye ngamanye amaxesha European umthetho abafundi nje umthetho esikolweni graduates asoloko nayo zethu China abaqondisi-mthetho ukucela oko kufuneka bakwenze ukuze babe ngamazwe abaqondisi-mthetho focused kwi-China umthethoIcebiso lam kubo iqhele a okuthile rambling dissertation kwi kufuneka ukwakha solid isemthethweni foundation ngexesha constantly neyokusebenza ekuphuculeni yakho Isitshayina ulwimi lwezakhono. Mna ke thetha malunga njani phantse wonke lawyer ndiyazi nje wehla wangena morphed kwi zabo amanqaku ummandla emva iminyaka emininzi njengoko a lawyer. Mna rhoqo ukufumana uluvo lona kanye kanye yintoni ezi umthetho abafundi young abaqondisi-mthetho musa ufuna ukuva. Abazithandayo specifics kwaye ndim zinika lectures kwi zilandelayo omnye ke, intliziyo, isiseko, izakhelo, uqeqesho, morphing, kwaye comment.
Abazithandayo babe i-China lamagqwetha namhlanje kwaye ndiya baxelele njani ukuba baya kulandela i-unclear kwaye kunzima kwaye convoluted indlela babe kuba ngenye imini abanye.
Apha ke zezinye specifics, ezinye eziya wam owakhe ramblings kwaye ezinye ezaye purloined kwaye appropriated evela kwabanye. Abaninzi ngamazwe firms kwi-mainland China kufuna attorneys nge-i-american okanye British umthetho amaqondo kwaye eziphezulu inqanaba Isitshayina ulwimi lwezakhono, kodwa kuba ezahlukeneyo izizathu, kunzima ukuba ufake i-China isemthethweni yokuthengisa ngaphandle edlulileyo amava e-United States okanye i-UK. Kubalulekile ukuqaphela ukuba Westerners ngokubanzi ayikwazi kuba iphepha-mvume China abaqondisi-mthetho banako kuphela kuba Langaphandle Ummeli Attorneys. kwaye kukho umthetho efuna Langaphandle Ummeli Attorneys kufuneka ubuncinane iminyaka emibini' amava kwelinye kolawulo lwesixeko phambi kokuba unako ukusebenza kwi-China. Abaninzi abaqondisi-mthetho get jikelele lo ngumthetho upelo ixesha labo phakathi omnye kolawulo lwesixeko (kuquka i-Hong Kong) ne-China. Ukuba ufuna ukuchitha ezintandathu ngenye imini kwelinye kolawulo lwesixeko nakwi-nyaka kwi-China, ukuba uya ubalo njengoko unyaka omnye kwimimandla ephantsi kolawulo lwesixeko. Ukuba uyayazi ukuba iminyaka emibini, wena afanelekile ukuba ukusebenza kwi-China njengoko Langaphandle Ummeli Lamagqwetha. Usenama-ayikwazi"practice"umthetho kwi-China, kodwa ungenza umsebenzi apho. Ngokubanzi, eyona ndlela ukwenza lento yokuchitha yakho yokuqala embalwa ezayo practicing umthetho ngalo enkulu KUTHI London Umthetho Ifemi kwaye ngoko hamba China ukuba senzo kuba iqelana eminyaka. Ngale ndlela ufuna ukuzisa i-i-american okanye British isemthethweni imfundo kwaye requisite eziphezulu inqanaba Umthetho Ifemi amava. Nkqu ukuba yakho Isitshayina ngu ezibalaseleyo, yakho wongeza ixabiso Umthetho Ifemi kwi-China yakho Plt-British isemthethweni wesiqalo. Ukuba sihamba China ngoko nangoko emva graduation kuwe sika kwi ntoni ungenza kunikela.
Kubalulekile ukuqaphela wayecinga ukuba real iqhosha ukwanda yakho ixabiso njengoko langaphandle lawyer ngokwenza China mthetho ukuze ukwazi ukufunda kwaye ubhale kuwo Isitshayina.
Ekubeni nako ukuze i beer okanye kuxoxwe imozulu kwi-Isitshayina enkulu njengokuba tourist, kodwa phantse meaningless njengoko omtsha lawyer abantliziyo oyintloko umsebenzi iqhele ukwenza uphando kunye nokuchaza ukubhalwa imithetho izivumelwano. Kwesinye isandla, kukho into kuba wathi kuba ke China ilungelo emva kokuba umthetho esikolweni. Iminyaka elishumi eyadlulayo ukuba wena wahamba ngoko nangoko kwi-China ubuya kuba xa iphela yakho isemthethweni career phambi kokuba aqalise. Ndiyazi a itoni enye kakuhle abaqondisi-mthetho abo waya Japan okanye Korea okanye China kwaye wachitha decades kwezo amazwe kwaye ngokwenza njalo waba enyanisweni unemployable njengoko abaqondisi-mthetho e-United States. Globalization ngu-ukutshintsha le rapidly, kodwa ihlala ingu kancinci risky kwaye mna frankly andazi ngoku imeko kakuhle ngokwaneleyo ukuba lokucebisa nabani na. Ndiyivile nangona ukuba wena musa ufuna ukuba iqabane lakho ngalo enkulu Umthetho Ifemi, oza-China kuqala kusenokwenzeka kakuhle. Nangona kunjalo, ukuba osikhangelayo i-i-american isemthethweni career, kusenokwenzeka? eyona ukuba uhlale e-States kuba ubuncinane a ezimbalwa emva kweminyaka nkqubo ithatha ilizwe ilibeke kufutshane umthetho esikolweni. Ukuthetha umthetho esikolweni, enye ngaphezulu ngokufanayo email zethu China abaqondisi-mthetho get ivela umthetho abafundi kwezo meko umthetho abafundi, ecela kwethu oko bamele qala ngokwenza ngoku bazilungiselele kuba career practicing China umthetho. Icebiso lam ngomhla ukuba kanjalo mhlawumbi kancinci kakhulu Antonio-njenge ngenxa yabo tastes, kodwa apha uyaya. Thatha njengoko abaninzi corporate kwaye intellectual property kwaye private wamazwe ngamazwe izifundo kangangoko kunokwenzeka. Ukufumana eyona amabakala kangangoko kunokwenzeka. Hone yakho Isitshayina ulwimi izakhono kangangoko unako. Hone nokuba nezinye iinqwelo ulwimi izakhono kufuneka kangangoko unako. Lately, mna zithe yokufumana ezininzi email ukusuka abantu abakufutshane sele besebenza China kwi-non-lawyer imisebenzi, ecela malunga yokufumana umthetho iqondo ukusuka i-isixhosa ulwimi umthetho esikolweni lwenkqubo iqinisiwe kwi nge Isitshayina umthetho esikolweni. Wam impendulo kubo ukuba cela into, ukuba iqondo kuya kuvumela kwabo ukwenza kanye kokuba kugqityiwe kwayo, kungenxa yokuba wam ukuqonda okokuba ayisayi kuvumela ukuba senzo umthetho njenge-China okanye i-United States. Ukuba nabani na ikholelwa ukuba ndine oku ezingachanekanga okanye ukuba nabani na ufumana ngobukho lizwe lethu ukuba ngaba imvume a graduate kunye enye yezi amaqondo ukuba senzo umthetho, nceda mandiyenze ukwazi nge amagqabantshintshi ngezantsi. Khangela kanjalo China"Ngamazwe"Umthetho Izikolo Practicing umthetho tends ukuya kufuna ezithile traits. Practicing umthetho kwi-China okanye nkqu ne-China kanjalo ifuna ezithile traits. Kuncinane kakhulu abantu abaninzi ukufumana kulo mthetho xa akuvumelekanga suited kuba nabo baza end phezulu unhappy.
Kufuneka passionately ufuna babe a lawyer okanye hayi bother.
Kufuneka passionately ufuna kuba China lawyer okanye hayi bother. Incwadi, China i-CEO: Amazwi ka-Amava ukusuka amabini Ngamazwe Iinkokeli Zoshishino, lidwelisa traits CEOs kufuna zabo expat lwabalawuli kuba China kwaye ezi traits ingaba pretty kakhulu efanayo traits kufuneka ibe okulungileyo ngamazwe lawyer okanye elungileyo China lawyer. Apha luluhlu, kunye wam izimvo kwi-okrwelwe ugca ngaphantsi: kwiminyaka embalwa edlulileyo, umthetho student emailed kum unxulumaniso a Quora umbuzo kwaye impendulo iseshoni kwi yintoni kuthatha kuba umntu ukuba waphumelela ngowe-usebenzela inkampani kwi-China njengokuba foreigner. Umthetho student ngokukodwa olukhankanywe iimpendulo zinikwe ngudavide Wolf kwaye wabuza nokuba ngaba ezo zinto isicelo China abaqondisi-mthetho ngokunjalo. Baya uninzi ngokuqinisekileyo ukuzenza I-ethile umbuzo kwi Quora waba"Yintoni engundoqo izakhono eziyimfuneko ukuze waphumelela usebenzela inkampani kwi-China njengokuba foreigner."Udavide Wolf ke ezibalaseleyo impendulo ibonisa njengoko inani omnye ngenxa liphezulu inani (kubandakanywa inani ngabemi China bloggers) voted kuyo inani elinye. Wolf ke impendulo waba ukuba"njengoko umntu othe hired egameni enkulu kunye nabalobi iinkampani apha kwi-China, ndinganixelela uhlobo young foreigner abo efumana hired sele kakhulu okanye zonke ezi zilandelayo: (wam izimvo basemazweni okrwelwe ugca ngaphantsi) mna ikakhulu amele iinkampani ukwenza ushishino ezivelayo kwimakethi amazwe.
Oko ithathe kum iminyaka emininzi ukwakha wam womnatha kwaye kuthatha intsingiselo unxibelelwano kwaye bahambe ukugcina oko.
Umsebenzi wam wenziwe njengoko varied njengoko securing ukukhutshwa ezimbini improperly igcine helicopters kwi-netherlands, ucwangcisa isemthethweni-sikhokelo ukusa slag ovela Ekhanada ukuba Poland ke sangaphakathi, overseeing amakhulu ka-litigation kwaye arbitration imicimbi kwi-south Korea, ekuncedeni umntu uphephe terrorism iintlawulo kwi-Japan, kwaye seizing intlanzi imveliso kwi-China ukuya kuqokelela kwi ityala. Mna sathiywa njengoko omnye kuphela ezintathu comment ingxwaba Urhulumente Amazing abaqondisi-mthetho kwi-wamazwe Ngamazwe, ndinguye AV rated yi-Martindale-Hubbell Umthetho uvimba Weefayili (yayo ephezulu umyinge), ndinguye rated. yi-website, kwaye ndingumntu Super Lawyer Ndingumntu rhoqo umbhali kwaye wonke somlomo kwi ukwenza ushishino kwi-e-Asia kwaye mna constantly ukuhamba phakathi kwe-United States kwaye e-Asia. Mna uninzi commonly ndithethe kwi-China umthetho ngemiba kwaye ndim kukhokela umbhali le mbasa ifumana China Umthetho Hetalia. Forbes Magazine, Fortune Magazine, Eludongeni Street Journal, abatyali-mali Lwamashishini imihla Ngemihla, Ushishino Ngeveki, Wesizwe Umthetho Yembali, comment ingxwaba Ngeposi, vavanya imifanekiso Yembali, Umhloli, Newsweek, NPR, Enew York phinda-Phinda kwaye Ngaphakathi Ingcebiso kuba bonke udliwano-ndlebe nam malunga ezahlukeneyo imiba wam wamazwe ngamazwe senzo. Kwi-tandem kunye wamazwe ngamazwe iqela ngexesha lam ifemi, mna kugxila ekumiseleni nokubhalisa iinkampani overseas (via WFOEs, Iliso Ofisi okanye Edibeneyo kakhulu kwamaxabiso izivumelwano zokwakha uluhlu), drafting ngamazwe izivumelwano (NDAs, OEM Izivumelwano, nephepha, unikezelo, njl. njl.), ukukhusela IP (iimpawu zokurhweba, urhwebo secrets, copyrights kwaye patents), kwaye overseeing M A eyenziweyo. Siya kuba ngokuxoxa i-isebenziseke imiba Isitshayina umthetho kwaye njani oko impacts ishishini apho.
Siya kuba ndizixelela ukuba wena into isebenza kwaye ithetha ntoni na kwaye oko kuwe njengokuba businessperson ayenze ukusebenzisa umthetho wakho, oko kuya.
Injongo yethu kukuba ukuncedisa amashishini sele China okanye ucwangciso ukuya kwi-China, hayi ukuba aphule entsha emhlabeni kwi-isemthethweni inkumbulo okanye mgaqo-nkqubo. Zethu nzulu ulwazi China ke inkqubo esemthethweni, inkcubeko, kwaye ishishini ukutshintsha kwemozulu ukwenza zethu China senzo enye uninzi sophisticated kwi-KWETHU. Nabaqondisi-mthetho kuba earned ngamazwe acclaim kuba kukubonelela ukusika-edge isemthethweni izisombululo KUTHI - iinqwelo-esekelwe iinkampani ukwenza ushishino okanye ne-China. Zethu baninzi amava uphatho-China-ethile, iqumrhu ukumiselwa kwebandla, izivumelwano, intellectual ipropati imicimbi, kwaye imbambano isisombululo inika zethu abaxhasi zokhuseleko lokwazi baya kuba ngokwenene ukuvakaliswa isemthethweni iqela emva kwabo.
Igunya Lamagqwetha kwi-China
Iinkampani kunye engena kwi-China, nokuba ngaba yadalwa wobulali abatyali-mali okanye foreigners unako atyumbe kuba ukumelwa umntu wesithathu oko kusenokuba oyedwa okanye olunye uhlobo lwequmrhuKulo mba amandla lamagqwetha kufuneka kukhutshwa, uxwebhu ngokusebenzisa apho wonyula umntu unako umthetho egameni lenkampani, grantor, okanye abanye abantu ngomhla Isitshayina territory. Ulungile ukwazi ukuba nabaqondisi-mthetho kwi-China unako amele nawuphi na umntu okanye inkampani kunye amandla lamagqwetha (ngesingesi kwaye Isitshayina), kwaye kanjalo unako isikhokelo nani kulo lonke engundoqo amanyathelo ka-ukulungiselelwa uxwebhu. Abacebisi bethu unako anike enjalo isemthethweni iinkonzo egameni umnini okanye iqumrhu ngoncedo amandla lamagqwetha.
Kufuneka Elinolwazi Eyimali Lawyer kwi-i-shanghai, China. Kwiwebhusayithi
I-shanghai ngu-China ke, oyena isixeko embindini of commerce kwaye iimaliUmthetho Ifemi ke Isixhosa McDermott Uza Emery ngu strategically lungelelanisa kunye MWE China Umthetho Ofisi ukubonelela epheleleyo umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo zoshishino icebiso Isitshayina iinkampani kwaye multinational amakhulu ukwenza ushishino kwi-China. Ukususela i-shanghai-ofisi, MWE China Umthetho inikezela diverse candelo amava. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Zethu i-shanghai-ofisi, esekwe kwi, wenziwe luthi lunxulumano kuba umsebenzi wethu kwi kweelwimi-ifumana eyenziweyo kwi-China.
Uninzi iqwalaselekile, thina lokucebisa abaxhasi kwi imicimbi involving ukwakhiwa kunye neziseko iiprojekthi, securities, iinqwelo ngqo investments, mergers, acquisitions.
Umthetho Ifemi ke Isixhosa Waseka ngowe, LPA sele presently ngaphezu kwe- abaqondisi-mthetho kunye u-ofisi kwi-Paris kwaye Hong Kong.
LPA abaqondisi-mthetho' ingcali ulwazi a inani u kwiindawo yenza kubo idilesi ngokupheleleyo uluhlu lwabo abaxhasi' iimfuno. LPA ke engundoqo imihlaba ye imisebenzi ingaba Ipropati Umthetho. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Troutman Sanders LLP ufumana i-wamazwe ngamazwe Ifemi kunye ngaphezulu kwama- abaqondisi-mthetho kwaye elinesithandathu kwi-ofisi North America, i-Europe kwaye e-Asia. Waseka ngowe, ifemi ke yelifa lemveli, ka-kofakwano amava, exceptional ukuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zoluntu i-unwavering kwalo inkonzo sele garnered olomeleleyo, ixesha elide-nokuma. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Clyde Co yi anako konke, rapidly ukwazi yehlabathi Umthetho Ifemi focused kwi liqonga uzalise isemthethweni inkonzo abaxhasi bethu ezingundoqo macandelo. Thina lokucebisa amashishini ukuba ingaba e intliziyo kwihlabathi liphela commerce norhwebo. Zethu yelenqe candelo iinkalo zobuchule, commercial attitude kwaye kwi-ubunzulu. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Bryan Cave lukhuthaza onke amandla ayo kwaye iinzame kwi ukunikezela eyona kunokwenzeka isemthethweni ukumelwa ukuqhubela phambili abaxhasi' umdla. Isebenza ngokusondeleleneyo kunye Asian ofisi ebekwe kwi-Hong Kong, Beirut, Singapore kwaye Tokyo, i-shanghai-ofisi limele KWETHU, European kwaye Asian iinkampani ukwenza umsebenzi ishishini kwi-China kwaye kulo lonke Asia Pacific ngingqi, kwaye Isitshayina iinkampani kwi apho. K L Amasango LLP limele ezikhokelela yehlabathi amakhulu, ukukhula koqoqosho eliphakathi-kwimakethi iinkampani, ikomkhulu kwiimarike abathabatha inxaxheba entrepreneurs kwi-wonke enkulu ishishini iqela ngokunjalo necandelo likarhulumente karhulumente, namaziko emfundo, philanthropic organizations kwaye abantu. Zethu senzo ngu robustly a Sisebenzisa i-ngamazwe abarhwebayo Umthetho Ifemi ne-ofisi kwi-Beirut, i-dubai, Hamburg, Hong Kong, Le Havre, London, i-monaco, Paris, Piraeus, i-shanghai kwaye Singapore. Zethu abaxhasi aqala kwi enkulu ngamazwe amakhulu ukuze encinane, iinkampani, sole traders kwaye private abantu. Thina senzo isingesi Mayer Brown JM ke Hong Kong-ofisi yi-ekhaya omnye likhulu kwaye sebenza ngokujikeleza-emiselwe Ngumthetho Firms kwi-Hong Kong. Conveniently ebekwe kwi-Central, siya kuba ngaphezu kwe- abaqondisi-mthetho esekelwe kwi-Hong Kong, specializing ezahlukeneyo imizi-mveliso. Siyakwazi ukubonelela abaxhasi kunye ezeleyo esihlangeneyo umqolo.
Usimon Shang Partners ngu epheleleyo-nkonzo Umthetho Ifemi esekelwe kwi-i-shanghai, China.
Zonke abaqondisi-mthetho kwi-ifemi share umbono: ukuzinikela professionalism kwaye ukugqwesha kwi-i-atmosphere kugxininisa ukubaluleka komntu teamwork.
Usimon Shang Partners rhoqo ingaba imbono ukubonelela high-umgangatho kwaye iindleko-esebenzayo ngokusemthethweni.
DLA Piper waba lelinye oyena isemthethweni inkonzo bamatyala ehlabathini kwi- nge-ukudibana ka-unprecedented ekhaya kwi-isemthethweni kwicandelo lezolimo. Xa inkulu kuzo umlinganiselo, ukudibana isicwangciso-buchule waba elula - ukwenza i-ngamazwe isemthethweni senzo capable ka-ethabatha nokukhathalelwa ibaluleke kakhulu isemthethweni iimfuno zabantu. Sidley Austin LLP ufumana i-global Umthetho Ifemi, kunye nama- abaqondisi-mthetho kwi-elinesixhenxe ii-ofisi. Sinike a ngokubanzi umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo ukuhlangabezana neemfuno zethu diverse umxhasi-base. Elicebo kusekwe ii-ofisi zethu kwi qhosha corporate kwaye mali centers yehlabathi sele yenziwe kwethu. Yashi accomplishes lo msebenzi yi-ukuqonda yayo abaxhasi' amaxabiso kwaye iimfuno nezixhobo zokusebenza tailored amanye amacebo ukuze kuphunyezwe ezi njongo. Ngale ndlela, Yashi satisfies kuyimfuneko zethu abaxhasi kwaye inzuzo yabo trust. Zethu abaxhasi ixabiso iinkonzo zethu kwaye ubudlelwane kuthi ngenxa singathatha elinye.
igunya lamagqwetha apostille ye-china - China Ubungqina
Loluphi uhlobo Amaxwebhu get Apostille
China ayikho ilungu Hague Convention ke ngoko, akuvumelekanga ukuba i-apostille lizweUkuqhubela amaxwebhu ezifana wokuzalwa isiqinisekiso, amandla lamagqwetha, corporate amaxwebhu, amanqaku ka-incorporation, personal amaxwebhu, isiqinisekiso somtshato njalo-njalo. omnye kufuneka uhambe nge-lengthy inkqubo lesixokelelwane ka-ubungqina. Xa uxwebhu ngu ngokupheleleyo legalized kunokwenzeka aqonde kwi-China. Apostilles ziyafumaneka kwi-amazwe, apho esayiniweyo i-Hague Convention Abolishing le yokuba zilawulwe ka-Legalization ka-Iinqwelo-Wonke Amaxwebhu, popularly yaziwa njenge Hague Sivumelwano. Esi sivumelwano, yenziwe kwi, kubuyisela ixesha consuming lesixokelelwane iziqinisekiso inkqubo esetyenziswa ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, apho ubune ukuya ezine ezahlukeneyo-mandla ukuze ufumane uxwebhu lavuma. Amandla lamagqwetha, wokuqhawula umtshato ummiselo, notarized amaxwebhu, wokuzalwa isiqinisekiso, corporate amaxwebhu, FDA amaxwebhu njl-njl. Ngu-China Iqela kwi-Hague Sivumelwano Akukho China ingaba iqela le Hague Convention, Jordan kwaye Hong Kong ingaba amaqela ukuba Hague Sivumelwano. Amandla lamagqwetha (i-poa) okanye ileta lamagqwetha ngokufanayo umthetho iindlela okanye ugunyaziso kwiindawo zasekuhlaleni umthetho iindlela ufumana i-yogunyaziso asebenze kwi umntu ongomnye ke egameni kuwo ngokusemthethweni okanye ishishini mba. Umntu ekuthiwa kwi amandla lamagqwetha asebenze kwi yakho egameni ngu commonly ekubhekiswe kuye njengoko yakho"iarhente"okanye"lamagqwetha fact."Kunye elisebenzayo amandla lamagqwetha, yakho iarhente banokuthatha nayiphi na intshukumo permitted kwi-uxwebhu. Rhoqo yakho iarhente kufuneka anike yenkqu uxwebhu invoke amandla. Umzekelo, ukuba omnye umntu isithethi ikhutshwe egameni lakho ukuba sithengise i-automobile, kwezithuthi icandelo ngokubanzi ziza kufuna ukuba amandla lamagqwetha kuba zaziswe phambi yakho iarhente ke igunya atyikitye isihloko iya kuba honored.
China: Real Ipropati Umthetho Kamasipala Library ka-Congress
Abantu ayikwazi ngasese owakhe ilizwe kwi-China kodwa babe nokuzuza transferrable ilizwe-sebenzisa amalungelo kuba inani leminyaka kuba imali
Okwangoku, ubukhulu elithi kuba engaselunxwemeni ilizwe-sebenzisa amalungelo wanika kuba zokuhlala ngeenjongo ufumana amashumi asixhenxe iminyaka.
Ukongeza, abantu banako ngasese owakhe zokuhlala izindlu kwaye apartments kwi ilizwe ("ekhaya ubunini"), nangona na ilizwe ngomhla apho izakhiwo ingaba situated. Real estate babe sithunyelwe nge-ziyathengiswa, isipho, okanye ezinye isemthethweni kuthetha. Xa real estate ngu transferred, ilizwe-sebenzisa amalungelo ekhaya ubunini ingaba transferred ngaxeshanye. Izithintelo ukuba angenza isicelo unikezelo ka-real estate ziquka prohibiting unikezelo xa ilizwe-sebenzisa amalungelo ingaba reclaimed ngokuthi urhulumente ngokungqinelana nomthetho, okanye xa ipropati alifumanisanga uhleli kakuhle ebhalisiweyo, kwaye iziqinisekiso ubunini abanalo. Zombini engaselunxwemeni ilizwe-sebenzisa amalungelo ekhaya ubunini ingaba ngokulawulwa ubhaliso. Ubhaliso ingaba yenziwa yi-wobulali abasemagunyeni ngomhla okanye ngaphezu khawunti inqanaba iziqinisekiso ingaba ekhutshwe qinisekisa ukuba amalungelo mashishini. Le ngxelo inika ulwazi kwi i-real ipropati umthetho-China Imibuzo kuhlangatyezwana kuquka nokuba abantu kuba ilungelo ngasese owakhe kwaye ngalo real ipropati kwi-China ngokukhethekileyo, nokuba wabucala umntu unako owakhe indlu okanye ilizwe ngomhla apho indlu iphaya kwaye, ukuba kunjalo, nokuba ngaba private umnini unako ngalo okanye ngenye indlela alienate yakhe okanye inzala yakhe kwi-real kwipropati ngaphandle sesihloko. Umgaqo-Siseko we - Abantu ke Republic of China (PAPER okanye China) ubonelela umyalelo wokhuselo abucala ipropati. Inqaku ishumi elinesithathu-Siseko sichaza ukuba"m abemi' ezisemthethweni private ipropati ngu inviolable. Urhulumente, ngokungqinelana nomthetho, kuyakhusela amalungelo abemi ukuba private ipropati kwaye ukuba ilifa layo."Ngoku-Siseko, esibizwa yamkelwa ngowe, wenziwe ya abane kwi.
I- isihlomelo equlethwe kumgaqo-Siseko ke kuqala cacisa ingqwalasela ka"yabucala"uhlobo propati yayo-siseko"inviolability,"nangona phambi utshintsho kumgaqo-Siseko kokuba banikwa umyalelo wokhuselo kuba"ilungelo abemi ukuba eyakho lawfully earned ingeniso, savings, izindlu kunye nezinye ezisemthethweni ipropati."PAPER Ipropati Amalungelo Umthetho (Wacquant Fa, kanjalo iguqulelwe njengoko Umthetho kwi Amalungelo kwi-Rem) waba kuqala ube wenziwe Ngomatshi, oku kulandelayo-mthetho debates ukuba kokuba ithathe kuba phezu-decade.
Ngobuchule ukususela ngo-oktobha, oku ngenkxaso umthetho kwi kwipropati kunye nineteen izahluko kwaye amanqaku amise-sikhokelo impahla amalungelo umyalelo wokhuselo, kuquka ukukhuselwa kuba movable ipropati kwaye real estate (bengagungqi property). Umthetho iidilesi ukusekwa, alteration, ukugqithisa, kwaye elimination of property-enxulumene ubunini amalungelo, kwaye ubhaliso kwaye kweenkonzo movable kwaye real ipropati amalungelo. Ngokunxulumene Nempahla Amalungelo Umthetho, ukusekwa, alteration, ukugqithisa, kwaye elimination of real ipropati amalungelo kufuneka ebhalisiweyo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngumthetho. Imeko-owned zendalo ingaba exempt ukusuka ubhaliso Ukongeza kwi-Ipropati Amalungelo Umthetho, China regulates real ipropati ngokusebenzisa uthotho ezinye nemithetho nemiqathango, kuquka PAPER Umthetho kwi Ilizwe Ulawulo, Ilizwe Ubhaliso Amanyathelo, Interim Imigaqo Malunga Ukunikezelwa kwaye Unikezelo ka-Ilungelo Ukusebenzisa Imo-Kumhlaba karhulumente basezidolophini (Ulwabiwo Imithetho), kwaye PAPER Umthetho kwi Yolawulo Engaselunxwemeni Lokwenene Ilifa (Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho). Phakathi kwezi nemithetho nemiqathango, ubukho buka-Imigaqo kwaye Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho ngokukodwa ukulawula ilizwe-sebenzisa amalungelo kwaye umnini kwipropati yokuhlala basezidolophini.
Engaselunxwemeni zokuhlala ilizwe ingaba usoloko uhleli regulated ngokwahlukileyo kwi zokuhlala ilizwe kwiindawo ezisemaphandleni, esingekhoyo lixoxiwe kule ngxelo.
Ubukho buka-Imigaqo baba promulgated ngowe- ngokuthi Urhulumente Ibhunga, apho regulates ubukho buka kwaye unikezelo umhlaba-sebenzisa amalungelo basezidolophini. I-Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho, esibizwa ube wenziwe kwi-agasti, iidilesi ngemiba real ipropati basezidolophini, kuquka unikezelo umhlaba-sebenzisa amalungelo, real estate uphuhliso, ukuthengisa real estate, real estate ubhaliso. Ngokomthetho-Siseko kwaye ilizwe imithetho, Isitshayina abantu ayikwazi ngasese owakhe ilizwe kwaye zendalo. Umgaqo-Siseko sichaza ukuba ilizwe basezidolophini kufuneka ekarhulumente, njengoko ilizwe kwiindawo ezisemaphandleni kwaye suburban kwiindawo kufuneka umnini - urhulumente okanye ngomoya wobulali collectives. Abantu banako, nakuba kunjalo, ufumane ilungelo lokusebenzisa umhlaba ukusuka urhulumente. Ilizwe-sebenzisa ilungelo phantsi Ipropati Amalungelo Mthetho"usufructuary ekunene"evumela ilungelo-holder, usufructuary, ngokusemthethweni endinako, sebenzisa, kwaye kuxhamla ipropati umnini omnye.
Basezidolophini, urhulumente unika okanye allocates ilizwe-sebenzisa amalungelo ilizwe abasebenzisi.
Sukela ilizwe-sebenzisa amalungelo, ilizwe abasebenzisi ahlawule urhulumente ngokumnika imirhumo ethile inani leminyaka. Urhulumente Ibhunga ngu wagunyazisa ngumthetho ukuba ziqulunqe ubukhulu amathuba apho ilizwe-sebenzisa amalungelo babe kunikelwa. Ilizwe-sebenzisa amalungelo kanjalo zinokuba esifunyenweyo kuba abanjalo iinjongo njengoko urhulumente okanye military sebenzisa, kwaye engaselunxwemeni zophuhliso okanye uluntu noku sebenzisa, apho ilizwe abasebenzisi ahlawule akukho imali okanye kuphela imbuyekezo okanye resettlement ezingahlawulwayo. Kukho ngokuqhelekileyo akukho kwezixhobo zokusebenza kwi-ubude bexesha apho ilizwe-sebenzisa amalungelo unako kwabelwa. Phantsi ngoku imigaqo emiselwe ngumthetho Urhulumente Ibhunga, ilizwe babe kusetyenziswa kuba zokuhlala iinjongo kuba phezulu asixhenxe iminyaka kuba mveliso ngeenjongo kuba amahlanu eminyaka kuba imfundo, science, inkcubeko, public health, kwaye imizimba imfundo ngeenjongo kuba amahlanu eminyaka kwaye kuba ushishino, tourist, kwaye recreational ngeenjongo kuba amane eminyaka. Ngokunxulumene Ipropati Amalungelo Umthetho, xa igama kuba ilungelo lokusebenzisa umhlaba kuba zokuhlala ngeenjongo layo, igama liya kuba ngokuzenzekelayo ukuvuselelwa. Umthetho akusebenzi ndiyicacise, nangona kunjalo, nokuba urhulumente ingaba kwentlawulo omnye ngokumnika imali ngexesha zokuhlaziya okanye indlela imali ingaba kubonelelwa. Abantu banako ngasese owakhe real estate, kuquka izindlu zokuhlala kwaye apartments (oko kukuthi, izakhiwo kunye zesixeko kwi ilizwe), nangona na ilizwe ngomhla apho izindlu kwaye apartments ingaba situated.
Inqaku -Propati Amalungelo Umthetho umisela ukuba"abantu anelungelo bonwabele umnini enjalo bengagungqi kwaye movable iimpahla njengoko zabo ezisemthethweni imivuzo, izindlu, amanqaku kuba yonke imihla sebenzisa, izixhobo zokulima, kwaye ekrwada mathiriyali."Ukunikezelwa Imigaqo anike loo mhlaba abasebenzisi atshintshele ilizwe labo-sebenzisa amalungelo abanye ngokusebenzisa ziyathengiswa, exchange, okanye isipho.
Ngokongezelelweyo, Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho umisela ukuba real estate babe sithunyelwe, mortgaged, okanye leased. Real estate ngu transferred yi-ziyathengiswa, isipho, okanye ezinye isemthethweni kuthetha. Xa real estate ngu transferred, ilizwe-sebenzisa amalungelo ekhaya ubunini ingaba transferred ngaxeshanye. Izithintelo kwi ukuthengisa real ingaba ipropati emiselwe ngumthetho. Umzekelo, ukuba unikezelo belizwe-sebenzisa amalungelo ngu priced substantially ngaphantsi kwe-yentengiso ixabiso, urhulumente ingaba preemptive ilungelo ukuthenga amalungelo. I-Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho uchaza kwiimeko phantsi apho unikezelo ka-real ipropati ngu prohibited, kuquka xa Nayo kukunceda kakhulu noting ukuba transferring real estate, kuquka umhlaba-sebenzisa amalungelo ekhaya ubunini, umnini omtsha uzuza ilizwe-sebenzisa amalungelo kuphela kuba ixesha no yoqobo yabelwe elithi uthabathe inani ezayo yoqobo umnini sele isetyenziswa ilizwe. Nangona Ipropati Amalungelo Umthetho ubonelela uhlaziyo oluzenzekelayo ixesha amalungelo okusebenzisa ilizwe ngenxa yokuhlala ngeenjongo, ezifana afanelekileyo imiba njengoko isixa-mali omtsha ngokumnika imali, ukuba ikhona, kwaye inkqubo kuba zokuhlaziya bahlala unclear. Uphawu Amalungelo Umthetho umisela ukuba ubhaliso real ipropati kufuneka ibe yenziwa yi-ubhaliso-mandla kwi-ndawo apho ipropati ukhoyo. Ukuba abe kwindawo ethile, Engaselunxwemeni Real Estate Umthetho umisela ukuba ilizwe-sebenzisa amalungelo kufuneka ebhalisiweyo kunye wasekuhlaleni ilizwe abasemagunyeni ngomhla okanye ngaphezu khawunti umphakamo, oya kukhupha isiqinisekiso umhlaba-sebenzisa amalungelo enze la malungelo. Ekhaya mashishini kufuneka ebhalisiweyo kunye wasekuhlaleni izindlu abasemagunyeni ngomhla okanye ngaphezu khawunti umphakamo, oya kukhupha isiqinisekiso ka-ekhaya ubunini ukuba enze ubumnini. Xa real ipropati ngu transferred, kobunini kufuneka ebhalisiweyo kunye izindlu abasemagunyeni xa iziqinisekiso ka-ekhaya ubunini ngu kancinane, i-kuguqulwa belizwe-sebenzisa amalungelo kufuneka ebhalisiweyo kunye ilizwe abasemagunyeni, ngubani na umba omtsha okanye kancinane isiqinisekiso ilizwe-sebenzisa amalungelo. Oorhulumente bamaphondo ingayalela enye i-arhente ngaphakathi wasekuhlaleni ngomhla okanye ngaphezu khawunti inqanaba ukuze yenze imisebenzi ubhaliso kunye ilizwe-sebenzisa amalungelo ekhaya ubunini, kwaye ukuba i-arhente wanga ke kukhutshwe i-real estate isiqinisekiso besomeleza kunye ilizwe-sebenzisa amalungelo ekhaya mashishini. Ngomatshi, Provisional Imigaqo kwi-Real Estate Ubhaliso sangena ukusebenza, apho injongo ukuseka i nationwide real estate ubhaliso indlela. Ngokunxulumene entsha Imigaqo, Kubulungiseleli Umhlaba kunye Noovimba uza kukhokela kwaye supervise i-real estate ubhaliso indlela nationwide wobulali oorhulumente ngexesha kwaye ngaphezu khawunti inqanaba uza designate real estate registries kwi-bazo imida. Efanayo ifomati ye-deed ka-isihloko iya kuba yamkelwa nationwide.
Ingaba kubiza malini na ukuba kukrazulwa i-apartment kwi-Shenzhen. Kuba Ukufundisa Recruiting
Ukhe wenza isigqibo Ukufundisa isingesi kwi-Shenzhen-China
Okanye ingaba ukhangela Ukufundisa isingesi kwi-Shenzhen, okanye ujonge kwi ezahlukeneyo izixeko kwi-China Ukufundisa isingesiNawe kanjalo mhlawumbi wabuza ngokwakho ngu Shenzhen expensive, okanye zi apartments in Shenzhen expensive ukuba kukrazulwa. Kweli nqaku, siza kuba yonke into ufuna ukufunda malunga iindleko kukrazulwa kwi-Shenzhen, ubomi Shenzhen kuba foreigners, jonga ngaphakathi apartment afumaneka kwi-Shenzhen, ngokunjalo a ekhaya impahla ixabiso Shenzhen kuthelekiswa avareji Shenzhen expat umvuzo. Kuba enye studio isimbo apartment kwi-China, kukrazulwa unako umqolo phakathi amabini RMB ngenyanga ukuze RMB ngenyanga, okanye phakathi dollazi KUTHI dollazi KUTHI ngenyanga kunye. Kwi-Tier ezimbini okanye Tier ezintathu izixeko, kukrazulwa ke cheap ukuba umqeshi wakho uya mhlawumbi uza kukubonelela a furnished omnye okanye kwa u-bedroom izindlu kuba ukuba bahlale kuzo zonke yi-ngokwakho. Kodwa Tier omnye izixeko, ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba esebenza ngalo i-Ngamazwe Esikolweni okanye Ngamazwe Kindergarten, aya kukunika noba usharedi indawo yokuhlala okanye izindlu imali evunyelweyo kwaye kwimali eyakho ukuba kukrazulwa i-apartment. Apho ingaba iindleko kukrazulwa kwi-Shenzhen ukuxoka noku umqolo onikiweyo ngasentla. Kuba Shenzhen, kuxhomekeke nokuba awuqinisekanga ebekwe kwi-city embindini, ummandla wedolophu inxalenye Shenzhen, okanye outskirts ka-Shenzhen, unako vary phakathi RMB ngenyanga kwi- RMB ngenyanga.
Nayiphi na imibuzo ubune ukuze sibe asikwazanga impendulo
Ukuba zibekwe khona kwisixeko embindini, uyakwazi silindele yakho apartment kukrazulwa ukubakho jikelele amabini anesihlanu ku amathathu anesihlanu ipesenti yakho ngenyanga umvuzo. Ukuba zibekwe khona kwi-ummandla wedolophu indawo Shenzhen, uyakwazi silindele yakho apartment kukrazulwa ukuba abe naphi na phakathi amabini ukuba amathathu ipesenti yakho ngenyanga umvuzo. Ngoku ingaba izikolo Shenzhen ebekwe kwi-city umbindi ahlawule ngaphezulu kwe izikolo ebekwe kwi-suburbs okanye outskirt ka-Shenzhen. Oku ngenxa yokuba abaninzi foreigners zithanda ukuphila kwisixeko umbindi we Shenzhen, kanjalo, izikolo kwi-outskirts idla iya kuhlawula ephakamileyo umvuzo ukuze ukutsala ootitshala ukusebenza ngomhla babo ezikolweni. Ngoko ke ukuba ufuna baba ukujonga ukugcina ngenene okulungileyo isixa-mali imali, ungafuna cinga ethabatha umsebenzi kwi-lwasemaphandleni indawo Shenzhen. Amaxesha ungafumana amabini anesithathu bedroom apartments kwi outskirts ka-Shenzhen ukuba iindleko efanayo okanye ngaphantsi a studio ebekwe kwi-city embindini. Oku largely ngenxa ubungakanani Shenzhen kwaye ngeli nibe technically ngxi kuba Shenzhen efanelekileyo kunokwenzeka iselwa a umgama ukusuka kwisixeko embindini. Phambi, phantse zonke izikolo ukuba hired isixhosa Ootitshala kwi-China inike free apartment kuba ootitshala, ngoko ke ootitshala asikwazanga kufuneka worry malunga ukufumana izindlu. Nangona kunjalo, ootitshala abaninzi waxelela zabo izikolo ukuba baye bakhetha ukufumana kwezabo izindlu ngoko ke banako isigqibo njani omkhulu indlu ukuba kukrazulwa, kwaye indawo ngokusekelwe zabo uluhlu lwezinto ezikhethwayo. Ukuze adapt ukuba iimfuno ootitshala, uninzi izikolo ngoku anike nje izindlu imali evunyelweyo nootitshala baya ativan akukho prescription kufuneka ukufumana kwezabo izindlu phezu arrival. Ngoku ukuba ufuna qiniseka ukuba ufuna ukufumana izindlu ezinikezelwe ngoko ke akunyanzelekanga ukuba ibandakanye ukufumana i-apartment, qiniseka ukuba umxelele yakho umsebenzi ubeko consultant kwangaphambili ukuba ufuna ndivuma kakhulu ukhetha ukusebenza ngomhla inkqubo enika izindlu. Ngokubanzi, kukho zintathu iintlobo yerente iimpahla ukukhetha ukusuka kwi-China.
Okokuqala, kufuneka i private omnye apartments umnini abantu ukujonga kukrazulwa zabo indlu tenants.
Kuba olu hlobo izindlu, kuza kufuneka ubeke isi kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo kukrazulwa njengokuba ukhuseleko idiphozithi, apho kuya kuba babuyela kuwe phezu ugqibo ye-yerente zengqesho. Umzekelo, kwi-Shenzhen, xa usenza ohlala kwisixeko embindini, kukrazulwa kuba kuphela izindlu izakuba jikelele, amakhulu amahlanu RMB ngenyanga, ngoko ke yakho ukhuseleko idiphozithi kuya kuba malunga ne, RMB. Ukongeza koku, kuya kufuneka ukuba uhlawule wo- iinyanga kukrazulwa ngokunjalo realtor iarhente imali, apho ufumana amashumi amahlanu i-kukrazulwa. Ingaba kancinci ziqinile kwi-lwabiwo-mali Kulungile, iindaba ezimnandi yesibini uhlobo yerente ipropati yi serviced yokuhlala. Kwi-China, omnye enjalo inkampani ngokuba MoFang Yokuhlala wenziwe building ezininzi serviced yokuhlala iimpahla kunye eziliqela ebekwe zonke phezu Shenzhen enika omnye izindlu kuba kwixesha elifutshane kwaye ixesha elide tenants.
Ukuba kukrazulwa a igumbi ukusuka MoFang, uza kuphela kufuneka ubeke enye inyanga kukrazulwa njengokuba ukhuseleko idiphozithi, kwaye uyakwazi kukrazulwa ukusuka njengoko elifutshane njengoko omnye nyanga njengoko ixesha elide njengoko ungathanda ukuba ukuphila apho.
Kanjalo, wena musa kufuneka ahlawule i-real estate iarhente umrhumo njengoko ukuba baba nako buza Isitshayina umhlobo ukunceda wena, angakunceda ukuba fumana indawo kukrazulwa. Lwesithathu uhlobo yerente ipropati ngu ekwabelwana ngazo izindlu. Ukuba ufaka kokuza Shenzhen, sinako ilungelelanise kuwe ngendlela iqela foreigners abakhoyo ukujonga get ekwabelwana ngazo izindlu. Kuba ekwabelwana ngazo izindlu, akukho real estate iarhente intlawulo efunekayo, kwaye uninzi kusenokwenzeka ukuba, idipozithi leyo iza kuba low.
Kanjalo, ekwabelwana ngazo izindlu inje elona lincinane expensive indlela kukrazulwa a room kwi-Shenzhen.
Xa safika kwi-China, uninzi izikolo ziya kubonelelwa kwiintsuku ezimbalwa free hotel phezu arrival. Kule yokuqala embalwa imihla, kufuneka utyikitye yakho yengqesho isivumelwano, thatha zonyango njalo, kwaye sebenzisa ixesha elishiyekileyo ukufumana yakho yerente apartment. Ngoku abanye foreigners zibe kancinci picky okanye kufuneka ngakumbi ixesha ukufumana ilungelo ekhaya. Abanye ungafuna ukulinda kancinci ixesha elide phambi putting phantsi a ukhuseleko idiphozithi kuba yerente apartment. Nokuba imeko yakho, ukuba ngaba kufunwa indawo ukuba uhlale kuba kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa, Airbnb ngu enkulu, indlela yokufumana yethutyana izindlu. Kanjalo, Airbnb kubaluleke kakhulu cheaper ngaphandle hotel, kwaye umgangatho nje njengoko mkhulu njengoko renting eyakho apartment. Kunjalo kwi-olugqibeleleyo ihlabathi, sithanda bonke abanqwenela ukuba olu hlobo imeko akwenzeki kuthi. Nangona kunjalo, kwimeko apho ukuba kuya kufuneka ukuba aphule i-apartment yerente isivumelwano, awufuni sebenzisa umngcipheko forfeiting zokhuseleko idiphozithi.
Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa ungayenza ukunciphisa ilahleko kwaye nkqu get emva lonke ukhuseleko idiphozithi.
Kuqala, zibalisa yakho landlord yakho imeko msinyane kangangoko kunokwenzeka.
Ngale ndlela, landlord unako lungisa ukufumana enye tenant ukuthabathela phezu yakho zengqesho.
Kwimeko apho i-landlord ngokuphonononga uyakwazi ukufumana enye tenant ukuthabathela phezu yakho isivumelwano, uza kuba noxanduva ukubhatala the landlord isiqingatha iinyanga kukrazulwa ukuba kuzihlawula iindleko.
Okwesibini, kufuneka ungafuna ukuba hire eyakho real estate iarhente ngokukhawuleza ukufumana umntu lowo unako ukuthabatha phezu yakho kukrazulwa. Okwesithathu, vumelani abahlobo bakho bazi yakho imeko kwaye akwazi ukufikelela kwinani lakho izindlu kwiqonga loluntu. Ukuba uyakwazi ukufumana enye utitshala abo banokuthatha phezu yakho ukuqeshisa, ngoko uyakwazi ukugcina ukuba entsha tenant iarhente imali, kwaye get emva yakho yonke ukhuseleko idiphozithi. Ukuhambisa ukuba China kusenokuba iselwa daunting, kodwa ukuba ufuna zilungiselelwe, kunokwenzeka i-adventure a lifetime.
Nceda shiya amagqabantshintshi phantsi apha ngezantsi okanye thumela kuthi umyalezo kwi zethu Uqhagamshelane Iphepha.
Ukufundisa Imisebenzi kwi-China Ukufundisa Imisebenzi kwi-i-shanghai China Ukufundisa Imisebenzi kwi-Beirut China Ukufundisa isingesi kwi-Shenzhen Ukufundisa Imisebenzi kwi-Tianjin China Ukufundisa Imisebenzi kwi-Guangzhou China Ukufundisa Imisebenzi kwi-Fuzhou China Kindergarten Imisebenzi Ulwimi Izikolo Imisebenzi Izikolo zikarhulumente Imisebenzi Ngezifundo Imisebenzi Omdala Student Imisebenzi Yoshishino isixhosa Imisebenzi Umlawuli we-Uphando Imisebenzi TEFL Iziqinisekiso Imibuzo ebuzwa Rhoqo Ubungqina Eluncedo Amakhonkco Ophilayo kwi-China Wesithathu Visa Handlers Uluhlu Isitshayina Consulates Uxwebhu Komhlaba Ulwazi Ibhodi Malunga Kuba Ukufundisa Recruiting Abasebenzi Profiles.
Civics inkcazelo kwaye intsingiselo - Collins English Dictionary
Amaze abahlobo bakho kunye yakho entsha-zifunyenweyo ulwazi
Tags ingaba elifutshane additions ukuba jonga njenge imibuzo, kusetyenziswa ekupheleni a declarative isivakalisiBaye ingaba ngamanye amaxesha kuthiwa umbuzo iziphawuli, kodwa abaninzi izivakalisi eziphela iphetshana elichazayo asingawo real imibuzo.
Collocations ngala mazwi ukuba ingaba esetyenziswa rhoqo kunye kwaye ingaba brilliant ekuhlaleni ngokubonelela yendalo sounding ulwimi kuba intetho yakho kwaye yokubhala. Akukho rote memorization.
Akukho ithuba ukungaphumeleli. Yakho ithuba ukuba ingaba i-one-to-one isifundo kunye best-uthengisa ulwimi ingcali Upawulos Noble, zama FREE enesandi isampuli yakhe lemveliso entsha Mandarin Isitshayina kunjalo. Yethu entsha ekwi-intanethi isichazi-magama kuba izikolo anike ikhuselekile kwaye efanelekileyo-bume kuba abantwana. Kwaye eyona bonke ke ad free, ngoko ke sayina ngoku kwaye qala ngokusebenzisa ekhaya okanye kwi-classroom. Sino phantse amabini anamashumi uluhlu amazwi ukusuka izihloko njengoko varied njengoko iintlobo butterflies, jackets, currencies, imifuno kunye uhlelo lwe thambeka. Igqityiwe nabo bonke kakhulu umhla entsha amazwi kwaye senses, oku entsha th edition ufumana i-unparalleled icebo kuba ilizwi lovers, ilizwi gamers, kwaye ilizwi geeks kuyo yonke indawo.
China Tourist Visa Ulwazi
incwadana yokundwendwela kufuneka ibe phezu months
Ukuba ufuna isicwangciso ukundwendwela oku magnificent lizwe, ngoko ke kufuneka ufumane I-China tourist visa (L-Visa) unikwa ukuba foreigners abo ungathanda ukuba fumana ubuhle of China, tyelela zabo relatives okanye azibandakanye kwezinye personal imicimbiAba ngabantu abo ube ujonge ukuba uhlale kwi-China kwi yethutyana qho. Ngokuhambelana nomgaqo China-U.S. abemi zibe eligible for -unyaka ezininzi ungeniso-visa. Eziseleyo iyasebenza ye-U.S. I-China tourist visa kusenokuba kanye, kabini okanye ezininzi amangeno.
Nawuphi na umntu ongelilo ilungu Isitshayina ubani kufuneka ufumane i-visa phambi kokuba yena unako faka territory of China.
Omnye ngu ngexesha ngqo logqithiso
Ukuba umntu waba sele possessed i-visa kwixesha elidlulileyo, kuya kufuneka ukhangele kuba yayo legitimacy. Kwimeko i-lixesha-visa, umntu kufuneka kwakhona isicelo zokuhlaziya.
Zininzi iimeko ukuba Isitshayina urhulumente exempts umntu ukusuka ukufumana i-visa.
Abantu abaya kuba ukuqhagamshela uhambo kwi-China ayisayi kuba obliged ukuba ingaba i-visa, njengoko ixesha elide njengoko bengayi zingaphezu amabini anane in staying kwi-China kwaye ngabo sele booked kuba i-engenayo uhambo.
Kanjalo, abantu abakufutshane aspiring ukundwendwela yexabiso elikhulu River Delta nakwiimeko Hainan Kwiphondo nge tourist waseka iqela yi-izizwe kunye okulungileyo diplomatic ubudlelwane China iya kuba exempted kwi nokufaka isicelo sephepha-na-China-visa. Okokugqibela, kuba abavela kumazwe angaphandle ka-Singapore, i-brunei, Japan, abakho kufuneka ube visa ngaphandle kokuba baya hlala kuba kuphela elinesihlanu imihla kwi-China. Ngokwenene kuxhomekeke acquirement ka-U.S. Oluhlaza Ikhadi zabazali. Ukuba abazali baba wanika Oluhlaza Amakhadi, abantwana kufuneka isicelo i-visa nje ukuba ufake i-China. Abantwana abo bangenalo acquired Oluhlaza Amakhadi babe kumvelela zabo Isitshayina yokundwendwela.
Isimemo Ileta esikhutshwe iinkampani, amakhulu, amaziko kwaye abantu kwi-China.
A photocopy lomthetho i-ID nganye nganye ulindeleke ukuba isimemo ileta ngu esikhutshwe oyedwa kwi-China. Ngokuhambelana nomgaqo China-U.S. visa amalungiselelo, U.S abemi zibe eligible for -unyaka ezininzi ungeniso-visa. Eziseleyo iyasebenza ye-U.S. incwadana yokundwendwela kufuneka ibe phezu ezilishumi nambini. Intlawulo yi-dollazi kuba U.S. abemi nokuba inani amangeno. Abafaki-zicelo unako ukuhlawula intlawulo nge-Visa, MasterCard, imali i oda, cashier ke, khangela okanye inkampani khangela. Visa-ofisi akusebenzi yamkela personal iqinisekisa okanye imali. Abafaki-zicelo bayakhuthazwa ukuba afake izicelo zabo malunga nama-inyanga enye phambi zabo departure imihla. Nangona kunjalo, kuya kuyanqaphazekaarely kuthatha oku kakhulu ixesha. Eneneni, embassy iwebhusayithi amabango hatrurite ukuqhubela kwenzelwa ngeelwimi ezine zomsebenzi. Ukubhatala iintlawulo ezongezelelweyo, ungafumana zichaziwe zenkonzo - zomsebenzi okanye kwangaloo mini rush inkonzo. Ukususela visa ofisi Isitshayina embassy kwaye consulate generals musa yamkela izicelo nge-imeyili, kufuneka gunyazisa umntu ukuze ufake isicelo. Oku kusenokuba umhlobo, isizalwane, ukuhamba ummeli okanye visa expediter. Ukuba ufuna andazi nabani na abo banako ukwenza oku, bethu inani elinye elicetyiswayo expediting inkonzo unako ukufumana yakho.
Succession ngamandla kuzo Abantu ke Republic of China
I-succession ngamandla kuzo Abantu ke Republic of China (PAPER) iqhubeka kwimeko enye iqela indlelaNangona isiqinisekiso ka-jikelele franchise kumgaqo-siseko, ukuqeshwa kwegosa Nezibalulekileyo Inkokeli lies largely kwi-ezandleni zakhe predecessor kwaye anamandla factions ukuba ulawulo i-Central Ikomiti yebhunga Communist Iqela of China. Ukuqeshwa inkokeli yabo ihlabathi ke, uninzi populous lizwe eyenzeka emva amabini anesihlanu unyaka mimiselo ngokungqinelana nomgaqo-Siseko Abantu ke Republic of China.
Kwixesha elidlulileyo kwaba kunokwenzeka kuba Nezibalulekileyo Inkokeli ukuba wield elililo amandla ngaphandle ubambe na ii-ofisi ephezulu.
Oku kwaba ityala kunye Deng Xiaoping owaye undisputed inkokeli ukusuka ukuba ngaphandle ubambe na ephezulu ofisi iqela state. Ukususela yakhe yomhlala-phantsi, mandla kuba ngaphezulu oluhleliweyo kunye inkokeli ubambe zontathu ka-ngaphambili kukhankanywe ii-ofisi. Ingcamango Nezibalulekileyo Inkokeli kwamiswa ngexesha era ka-Mao Zedong. Indawo waba ngaphezulu emiselwe phantsi Deng Xiaoping, nangona kunjalo ixesha Elizayo Inkokeli alifumanisanga sele officially attributed na ezinye iinkokeli. Ukususela umhlala-phantsi ka-Deng Xiaoping ngo, ezopolitiko amandla China wenziwe ukuba igcine kunye yi-amalungu Politburo Emi Ikomiti yebhunga Communist Iqela of China. I-Unobhala Jikelele ibe eyona njengoko kuchaziwe primus phakathi pares, kuqala phakathi ilingana. Ngenxa yeenkqubo le umzimba ezicingelwa kwimo afihlakeleyo, ngaphakathi workings ka-Politburo asingawo made-wonke. Kucacile, nangona kunjalo, ukuba kwezigqibo ingaba baba consensus asukelwa kwaye ukuba akukho omnye nani unako na ixesha elide umthetho unilaterally njengoko ngemihla Mao Zedong kwaye Deng Xiaoping. Siseko amandla Abantu ke Republic of China ngu eziphethwe i-Central Ikomiti yebhunga Isitshayina Communist Iqela (CCCPC). Nangona eli qela malunga nama-ama amalungu akanalo igunya ngendlela efanayo njengoko a esiqhelekileyo iqumrhu lowiso-mthetho, ibaluleke kakhulu kwaye yabalawuli amagosa enkqubo Isitshayina urhulumente ingaba onke amalungu. Oku umzimba iqela amabini anesihlanu abantu (okwangoku amabini anesithathu abantu ababini abafazi) abaya kulawula Communist Iqela ka-China (CCP). Theoretically, Politburo inyulelwa yi-CCCPC nangona kunjalo, enyanisweni na entsha ilungu Politburo ngu esikhethiweyo nge ngoku amalungu. Politburo amalungu bamba izikhundla kwi-China ke urhulumente wesizwe kwaye jonga izikhundla amandla ngaxeshanye ngaloo ndlela consolidating i-CCP ke amandla. Kwimeko iqhosha mgaqo-nkqubo izigqibo, izihloko ingaba kuhlangatyezwana Politburo apho ke limisela iintshukumo ukuba kuthatyathwa ngumthetho wesizwe wasekuhlaleni. Lo mgaqo-nkqubo icala kuba lonke ilizwe rests kwi-ezandleni ezi amabini anesihlanu abantu abo kuhlangana kunye kanye ngenyanga. Admission kwi Politburo ufumana kunzima kakhulu Ziqinile ulawulo phezu umzimba exercised nge ngoku amalungu abo vet enokwenzeka amalungu ngenyameko ukugcina ungqinelwano ngamandla. Ezilungileyo ezopolitiko budlelwane nabanye ngaphakathi Politburo ingaba sentloko admittance kwi qela. Onke amalungu Politburo bayonyulwa kuba anesihlanu unyaka mimiselo. Amandla ngaphakathi Politburo ngakumbi concentrated kwi-Politburo Emi Ikomiti yebhunga Communist Iqela of China. Eli qela ezisixhenxe amalungu meets kunye weekly kwaye wakhokela yi-Unobhala Jikelele. Unyulo oluphezulu leadership kwi-PAPER yenziwa nge-nkqubo ukuba unako eyona kuba njengoko kuchaziwe i-ngqo unyulo. Kule ndlela, enye kuphela umgqatswa kumi kuba unyulo na onikiweyo indawo. Nangona ezinye candidates azivumelekanga ukuba formally qhuba, ukubhala ngendlela candidates luvumeleke. Ngo, xa National Abantu ke Congress onyulwe ukuba abe Xi Jinping njengoko umongameli, amalungu voted abaxhasayo kwaye omnye ngokuchasene, kunye ezintathu abstentions. Ngokufanayo, kwi- unyulo, Hu Jintao, ngoko-Unobhala Jikelele, Umongameli-Sihlalo we-Central Military Ikhomishini, yaphinda onyulwe ukuba abe yijaji landside. Le amalungu th Wesizwe Abantu ke Congress, kuphela ezintathu voted ngokuchasene Hu Jintao nomnye ezintlanu abstaining. Kwi-isebenziseke mimiselo, i-National Congress inika amaqampu stamp kwi isigqibo oko kukuthi eyenziwe Politburo kwaye Emi Ikomiti. I-transition ka-allen banokuthatha kweenyanga eziliqela Umzekelo, xa Hu Jintao wathabatha phezu amandla ukusuka Jiang Zemin, transition amandla twezekile ngaphandle phantse emva kweminyaka emibini. Zidweliswe ngezantsi kukho imihla kwi apho Hu wonyulwa ukuba ngamnye-ofisi. Idla i-ofisi ka-Sihlalo we-Central Military Ikhomishini le yindlela yokugqibela-ofisi nikezelwa yi-edlulileyo inkokeli, ukuze zikhuseleke impembelelo kwezopolitiko kwaye uqinisekise ukuba ezopolitiko continuity. Ezi zikhundla ukuba iqhosha ofisi ingaba eyona predictor ka-abo elandelayo inkokeli uza kubakho. I-ofisi usekela kamongameli-Sihlalo we-Central Military Ikhomishini (CMC) ebone ngabaprofeti abaninzi njengoko yokugqibela yima phambi ngokuba inkokeli of China.
Ukumiselwa kweli indawo ke crucial ukuba xa Xi Jinping, ngoku Unobhala Jikelele ayiphumelelanga ukufezekisa le-office kwi-th Plenum ngo, abaninzi abaphononongi wacebisa ukuba yena wawa esuka ukuthandwa kwaye bebengayi elandelayo inkokeli PAPER.
Yakhe ultimate idinga ukuba usekela kamongameli-Sihlalo we-CMC wabonwa njengokuba ubungqina ukuba kokuba iqalile okuzisa bakhe amandla kwaye baya ekugqibeleni waphumelela Hu Jintao xa lakhe elithi lixesha ngo- kwiziko th iqela congress. Absent a ngaphaya inkqubo yonyulo, idinga ukuba iqhosha izikhundla kuphela indlela ukuqikelela ixesha elizayo leadership kwi-PAPER. Qaphela kwitheyibhile ngezantsi, indlela ukuba Xi Jinping abalandela ukusuka eliphantsi inqanaba iqela esemthethweni ngalo eli amathathu yakhe ngoku indawo inkokeli lizwe likhulu ehlabathini. Njengoko ixesha elide njengoko Isitshayina urhulumente ihlala secretive malunga ngaphakathi workings ye-Politburo, elidlulileyo ukuziphatha iza kuqhubeka kuba uninzi kakuhle isixhobo kuba predicting elizayo ezi zikhundla. Kule meko, ukuqeshwa umgqatswa ukuba iqhosha ofisi ingu eyona isibonisi zabo elizayo indima. Umzekelo, ukuqeshwa Xi Jinping njengoko usekela kamongameli-sihlalo we-Central Military Ikhomishini le Communist Iqela of China signposted nge amanyathelo afanelekileyo isixa-mali ukukholosa ukuba wayeza kuba elandelayo inkokeli Abantu ke Republic of China.
Ngamazwe Inkundla Rejects China ke Amabango Afrika ne-China Kolwandle
'Nangona Isitshayina navigators kwaye fishermen, ngokunjalo abo ezinye states, waba ngokwembali made ukusebenzisa kweziqithi emzantsi Afrika ne-China Yolwandle, kwakungekho ubungqina ukuba China kokuba ngokwembali exercised exclusive ulawulo phezu kwamanzi okanye zabo zokusebenza, Inkundla yathiKe ndagqiba ukuba 'kwakungekho isemthethweni isiseko soluvo China ukuba ibango historic amalungelo zokusebenza ezingama-yolwandle kwiindawo falling ngaphakathi 'ithoba-dash umgca'."Kanjalo ifumanise ukuba akukho namnye China ke thathwa Spratly Kweziqithi Emzantsi China Yolwandle unako ukuvelisa maritime lendawo kwaye wabhengeza okokuba enkulu kwiindawo Kolwandle ibe ezimeleyo ngamazwe kwamanzi. Inkundla ekhutshwe a scathing ingxelo kwi-kunjalo, apho wakhutshwa ngu-Persia, ukufumana ukuba 'China kokuba violated i-Persia' sovereign amalungelo yakhe exclusive kwezoqoqosho eselunxwemeni yi - (a) interfering kunye Philippine fishing kwaye ze-oli ekrwada exploration, (b) constructing artificial kweziqithi kwaye (c) failing ukunqanda Isitshayina fishermen ukusuka fishing kwi-eselunxwemeni. Inkundla kanjalo igcine ukuba fishermen ukususela Persia (njenge abo kwi-China) waba esiqhelekileyo fishing amalungelo e-Scarborough Shoal kwaye ukuba China kokuba interfered kunye la malungelo ngendlela restricting ufikelelo. Inkundla kanjalo igcine ukuba Isitshayina komthetho izikhephe kokuba unlawfully wadala a ezinzima umngcipheko collision bakubona ukuba angakudlakathisi ngokwasemzimbeni obstructed Philippine izikhephe. Inkundla kugwetywa China ke ilizwe reclamation amaphulo yayo, ukwakhiwa kwamaziko artificial kweziqithi kwanezinye iincwadi kwi-Spratly Kweziqithi, concluding ukuba waba wenza"buhlungu kwenzakala ukuba umbala obomvu kakhulu reef-bume kwaye violated yayo obligation ukukhusela akhusele fragile ecosystems kwaye indawo ezihlala kuyo depleted, threatened, okanye endangered ke ngoko. China ke ilizwe reclamation"waba incompatible kunye izibophelelo kwi kwimo ngexesha imbambano isisombululo iingxoxo", ndidibanise, ukusukela oko obandakanyekayo ebangela"irreparable kwenzakala ukuba olawula imeko-bume esingqongileyo, Inkundla idityaniswe. Nangona kunjalo, inkundla ke ruling isihlalo akuthethi ukuba ukunikezela na outcrops okanye kweziqithi ukuba rival claimant amazwe kodwa endaweni lubonisa ngokucacileyo imisebenzi maritime ingaba capable phantsi komthetho wamazwe ngamazwe umthetho ijikelezisa territorial amalungelo phezu engqonge seas. Imeko-qhuba Xinhua iindaba i-arhente wathi ukuba 'umthetho abusing isigqeba' ekhutshwe i-ill-waseka kweelwimi kwi-Afrika ne-China Yolwandle arbitration. China ke Langaphandle Kubulungiseleli wathi ukuba 'China solemnly ubhengeze ukuba kweelwimi ngu null kwaye boolean kwaye sele akukho bophelela umkhosi. China ndivuma isamkele okanye kuqoqoqsho kuyo China engafikanga yathatha inxaxheba kwinkqubo inkundla ize iye yathi izama ukuba izakuba hayi imbeko yayo isigqibo kule meko.
I-Persia Isebe Langaphandle Imicimbi (DFA) ngokuba 'restraint kwaye sobriety' emva kokuba Inkundla ekhutshwe yayo verdict. China amabango ngaphezulu kwama- Zolwandle, malunga nama zintlanu yezigidi isikwere km, ngokusekelwe oko kuya sichaza njengoko 'zembali amabango.
'Nangona kunjalo, Vietnam, Etaiwan, Malaysia, i-brunei, kwaye Persia kuba ethengisela amabango kwi-Yolwandle. I-Philippine kuqala ezenziwe sesi sibini kunjalo ngokuchasene China ngo, nkqu nokuba China wala inxaxheba, exela ukuba Inkundla nampumelelo kolawulo lwesixeko kulo mba. Ngaphezu dollazi ezintlanu waka kwi-trade okokuba nge-Afrika ne-China Yolwandle kunyaka ngamnye, kuquka vital i-oli kunye liquefied igesi yendalo (LNG) shipments ukuba Ijapan, i-South Korea kwaye Etaiwan. Kanjalo khetha umbala we nje verdict yi-oli kunye negesi yendalo, apho abaninzi ibango sisizathu kuba Beirut ke ukwanda Afrika ne-China Yolwandle imisebenzi kwixesha elidlulileyo ambalwa eminyaka. Ngokunxulumene a United States Geological Uphando (USGS) uqikelelo, igesi yendalo kubaluleke ngakumbi abundant kwe-oli. I-USGS uqikelelo ukuba malunga amathandathu - lwe ariya u-hydrocarbon zokusebenza zixhomekeke igesi kwaye iwubeke sum ezingama-bamfumana ugcine kwaye undiscovered zokusebenza kwi-offshore basins Afrika ne-China Kolwandle e waka cubic iinyawo. Imeko-owned-oli enkulu China Wesizwe Offshore-Oli Inkampani (CNOOC), onoxanduva uninzi China ke offshore hydrocarbon uphuhliso, uqikelelo ukuba indawo loluntu jikelele bhiliyoni barrels-oli anesihlanu anamashumi waka cubic iinyawo zakhe igesi kwi-undiscovered iindawo, nangona amanani abanalo. iqinisekiswa yi-geqe uphando Nangona kunjalo, ngokunxulumene a ezintshana USGS nzulu ngo, kukho ithuba ukuba kukho ubuncinane yezigidi barrels-oli emzantsi Afrika ne-China Yolwandle Iqonga, median ithuba jikelele, yezigidi barrels, kwaye eliphantsi isenzo sempumelelo phezu, yezigidi barrels. Emzantsi Afrika ne-China Yolwandle Iqonga, ngokunxulumene geologists, inkalo otyebileyo kunye imvelaphi carbon kwaye ingaba olugqibeleleyo geological iimeko kuyimfuneko kuba hydrocarbon uphuhliso, ingakumbi i-oli. Oko kuquka indawo equlathe Spratly Kweziqithi, Ezinobungozi Emhlabeni, kwaye Reed Tablemount - zonke disputed Afrika ne-China Yolwandle amabango.
Imbambano Isisombululo Litigation
Nokuba awuqinisekanga abakwicandelo yokusasaza ngeenjongo zokurhweba imbambano, kwi-mali litigation, phantsi uphando, okanye ngokulula keen ukukhusela kwishishini lakho kwaye uqinisekise ukuba epheleleyo kuphunyezwe, bethu yehlabathi imbambano isisombululo iqela unako ukuncedaNokuba imeko, bethu phezulu ukubaluleka soloko ukufumana ilungelo sikazwelonke ukulungiselela wena. Ukumkani Wood Mallesons sesinye ezikhokelela Umthetho Firms kwi-imbambano isisombululo kwi-China. Thina khulula hayi kuphela enzima ukugqwesha kodwa kanjalo real ubunzulu ulwazi malunga zethu abaxhasi kunye neemarike apho baya ukusebenza kwi-China, e-Asia kwaye ngqukuva. Kunye phezu amathathu partners kwaye ngaphezu amabini anamashumi abaqondisi-mthetho kwaye paralegals, bethu imbambano isisombululo iqela sesinye oyena kwi-China. Umsebenzi kunye nathi kwaye uya kuxhamla zethu amabini iminyaka engama-amava advising ngamazwe kunye nelindle abaxhasi kwi egqiba disputes kwi-domestic kwaye umnqamlezo-umda litigation kwaye enye imbambano isisombululo kwi-China. Ukuba ungummi Isitshayina okanye ngamazwe umxhasi, ndisebenza kunye nathi kanjalo kuthetha ukuba kufuneka zethu iinkalo zobuchule njengoko yenkcubeko zitoliki kwindlela yakho icala - into oko kukuthi vital ukusukela imiba yenkcubeko unako exacerbate abarhwebayo disputes kwaye iingxaki. Zethu imbambano isisombululo iqela iqulathe talented abaqondisi-mthetho abo lokucebisa abaxhasi kwi umqolo yengxaki nemiba. Baya kuba wabonakala phambi Isitshayina iinkundla kunye nee-arhente yolawulo, kwaye phambi kokuba ihlabathi ke enkulu arbitration amaziko kwaye organizations. Kuba litigation kwaye arbitration, nabaqondisi-mthetho ingaba highly respected kwi-China kwaye ngaphesheya.
Baya kuba yathatha inxaxheba kwinkqubo highly ezibalulekileyo litigation kwaye arbitration amatyala.
Thina amele ezikhokelela multinational amakhulu, enkulu imeko-owned ezingama, private iinkampani kwaye mali amaziko emfundo kwi-ebalulekileyo litigation kwaye arbitration iingxoxo phambi iinkundla, arbitration umfundisi kunye nee-arhente yolawulo kulo lonke China.
Eyona nto Isitshayina iteknoloji ifemi iwele kwi bakhathazeka amanzi kunye U.S. kwezoqoqosho sanctions ngokuchasene ezithile langaphandle izizwe.
Eyona nto Isitshayina iteknoloji ifemi iwele kwi bakhathazeka amanzi kunye U.S. Department of Commerce ngenxa violations ka-U.S kwezoqoqosho sanctions ngokuchasene ezithile langaphandle izizwe. Oku upapasho wenziwe layishela phantsi egronjiweyo ukusuka Ukumkani Wood Mallesons kwiwebhusayithi. Ixeliweyo kuphela kuba ulwazi lwakho kwaye akakwazi eyiyo ngokusemthethweni okanye ezinye iingcebiso nayiphi ethile mba. Ukuba zifuna okanye bafuna isemthethweni ingcebiso kufuneka ufumane enjalo ingcebiso ukusuka kweyenu lawyer, kwaye kufuneka enze njalo phambi ethabatha, okanye refraining ukusuka ethabatha, nasiphi na isenzo kwi-reliance kule ukupapashwa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane Ukumkani Wood Mallesons.
Liquidation neenkqubo zomthetho karhulumente ngaphandle complications"Encyclopedia of ukhuseleko
Ubonakala inkqubo liquidation iinkampani ezininzi ugqityo ngu characterized nanguye nawuphi na umbutho kuba yayo imilinganiso kwaye imisebenzi. Kwi-siseko liquidation isemthethweni abantu akavumeli iimephu okanye iimpazamoUvala i-ishishini kulo naliphi na ityala lwenziwa ngo unskilled spices, admitting iimpazamo kwaye akukho amava ngu fraught kunye ezibalulekileyo zoko, kuquka wolwaphulo-mthetho. Kwesinye isandla, bamthwala ngaphandle yi-ingcali ke liquidation Bureau of ityala, nto efanayo alikho threatened Ngokuqinisekileyo, kufuneka owenza divestitures reliable kwaye experienced ingcaphephe e ekubeni umntu oqinileyo reputation. Abasebenzi ka-eyona nto specialized iinkampani anike abathengi kunye eziquqa kwaye painless elimination of amaqumrhu asemthethweni, ukusetyenziswa imeko imicimbi, specificity lwesiqu iintlobo, kuthathelwa ingqalelo personal inqwenelela neemfuno umthengi.
Ngaphandle ukusuka nantoni na ongomnye, thatha ingqalelo iindleko umlawuli kwi-inkqubo liquidation, LLC okanye nayiphi na enye ifomu mashishini.
Ngokufutshane, kuphela inyaniso iingcali bayakwazi ukuthatha kwi-akhawunti kakuhle ukuba zonke iinkcukacha kwaye yenza eyona izenzo kwi-scheme okanye ngenye indlela.
Ingqwalasela ka-idiphozithi ubunini kwaye fiduciary budlelwane nabanye. Isemthethweni Ulwazi Institute
ngenjongo ukuseka indlela apho imali ebolekiweyo owned ngamnye beneficial umnini zibe omiselwe kwi-fractional okanye ipesenti qho Inokuba accomplished nangaluphi na uhlobo ebonisa ukuba apho imali i-umnini ingaba commingled kunye nezinye iingxowa-igcine kwi custodial umthamo kwaye inxalenye yawo ngu kumaqhosha idiphozithi kwindawo enye okanye ngaphezulu insured depository amaziko ngaphandle kolwabiwo, umnini ke insured uza aqonde ibango kuba i-inshorensi coverage ngokusekelwe a fiduciary budlelwane kuphela ukuba ubudlelwane ngu osebenzayo ukuvumela disclosed, yi-indlela ethile ezinxulumeneyo,"faka i-akhawunti iimbali"(njengoko ichaziweEzinjalo budlelwane nabanye ziquka, kodwa kunganyinwanga budlelwane nabanye involving i-trustee, iarhente, nominee, umgcini ngokusemthethweni, obhalwe phantsi ukuze abe ilifa okanye custodian pursuant apho imali ebolekiweyo deposited.
I-zichaziwe uphawu ukuba i-akhawunti igcine kwi fiduciary umthamo ayisayi kuba kuyimfuneko, nangona kunjalo, kwiimeko apho ngokwaneleyo sibonakalise ubukho be-a fiduciary budlelwane.
Oku okukodwa angenza isicelo, umzekelo, apho idiphozithi-akhawunti isihloko okanye iirekhodi abonisa ukuba i-akhawunti eziphethwe i-escrow iarhente, isihloko inkampani okanye inkampani abantliziyo ishishini kukuba bamba efakwa ebhankini kwaye securities kuba abanye. disclose i-ubukho be a kubudlelwane apho babe anike isiseko soluvo eyongezelelweyo ye-inshorensi (kuquka, ngaphandle kwabafundi kumiselweyo kumgaqo-okanye ukusuka iimbali kwagcinwa, elungileyo ukholo kwaye rhoqo kunjalo ishishini, yi-depositor okanye ngabanye umntu okanye iqumrhu ukuba sele kwenziwa ukugcina iingxelo ezinjalo kuba depositor. Kwi-idiphozithi ii-akhawunti apho kukho ezininzi amanqanaba fiduciary budlelwane nabanye, zimbini iindlela satisfying paragraphs (b) (b) eli candelo ukuze ufumane i-inshorensi coverage kuba Disclose, ngexesha ngalinye inqanaba, igama(s) inzala(s) umntu(s) kwi zabo egameni umntu ngaloo inqanaba ngu isithethi. Disclose i-ubukho be ezongezelelweyo amanqanaba fiduciary budlelwane nabanye kwi mbali, kwagcinwa elungileyo ukholo kwaye rhoqo kunjalo ishishini, yi-amaqela e emva amanqanaba Disclose, ngexesha ngalinye amanqanaba, igama(s) inzala(s) umntu(s) kwi zabo egameni umntu ngaloo inqanaba le-a fiduciary umthamo kuba abanye ngaphandle kokuba kwenzeke ubukho be enjalo budlelwane ityhiliwe e abanye edlulileyo inqanaba kwi-lesixokelelwane. ingaba evidenced nge negotiable isiqinisekiso idiphozithi, negotiable idrafti, negotiable cashier ke, okanye igosa ke, khangela, negotiable eziqinisekisiweyo khangela, negotiable traveler ke, khangela, incwadi credit okanye ezinye negotiable instrument, uza aqonde umnini enjalo idiphozithi obligation kuba zonke iinjongo ka-ibango kuba insured efakwa ebhankini ukuze efanayo kangangoko njengoko ukuba lakhe okanye igama lalo kwaye ndiya sikwazi ukuva holders ezinjalo izinto kuba zonke iinjongo ka-ibango kuba insured efakwa ebhankini ukuze efanayo kangangoko njengoko ukuba zabo igama(s) inzala(s) baba disclosed njengoko depositors kwi, xa enjalo ibango kuba insured efakwa ebhankini, ukuba ngenye indlela ziyabhatalwa, wenziwe esekwe uphumezo kwaye ukuhanjiswa emiselwe iifomu. Intando aqonde enjalo depository iziko usiya phambili izinto ezinjalo kuba holders bawo njengokuba iarhente kuba abanjalo holders ngenjongo esenza ulwabiwo ukuya.
Real Estate Imali Kwingxowa-Mali
I-Real Estate Imali kwingxowa-Mali yamiselwa ukuba reimburse abo sigwetywe nge Florida inkundla ukuba banyamezele ezibalulekileyo olukhawulezileyo lwemali umonakalo kwi-real estate intengiselwano njengoko ngenxa izenzo a real estate licenseeAkukho punitive umonakalo othe zibe yesebe eqokelelweyo kwingxowa-mali. Imali kwingxowa-mali kanjalo lukhona reimburse a broker abo lost a lawsuit ezibangela ukuba ukususela disbursing imali njengoko kuchazwe kwi-i-Escrow Disbursement Ukuze - (i-EDO) Real Estate Imali kwingxowa-Mali inikwe yenzelwe ukuba reimburse maqela okokuba baba significantly yonakele kwi-real estate intengiselwano. Ikhomishini babe kweelwimi i-mali isixa imali yokunceda umntu ukuba wenziwe ukuba yonakele yi-ukuziphatha kwe licensee. I-real estate licensee kufuneka obandakanyekayo kwi-intengiselwano apho ibango lwenziwa. I licensee kufuneka kuba ngoku kwaye semthethweni real estate licensee. umntu owenza ibango malunga a real estate intengiselwano apho a licensee akazange isithethi njengoko i-broker okanye iintengiso associate C. umntu owenza ibango malunga intengiselwano kuphethwe yi-a licensee abo babengengabo abambe kwaye ngoku semthethweni sephepha-mvume xa intengiselwano yenzekile Phantsi FS, intlawulo kwingxowa-mali ye-amabango involving enye intengiselwano ayikwazi zingaphezu dollazi, okanye unsatisfied indawana ibango, whichever ngu ngaphantsi. Uhlawulo ezininzi amabango owenziwe ngokuchasene naziphi na omnye broker okanye iintengiso associate akavumelekanga ukuba zingaphezu kuqhutywe dollazi. Ukuba nasiphi na isixa-mali ufumana imali ngaphandle Real Estate Imali kwingxowa-Mali ukuze settle ibango okanye yanelisa a isigwebo ngokuchasene licensee, lakhe yakhe sephepha-mvume kufuneka ugxothiwe. I-licensee kufuneka lihlawule septemba isixa-mali kwi-izele, dibanisa inzala, phambi yephepha-mvume kusenokuba reinstated. Ukuba broker abo disbursed escrow imali phantsi i-Escrow Disbursement Ukuze ufumana sued kwaye EDO not found ibe semthethweni, broker ube unelungelo lokuba reimbursement kwingxowa-mali. Ukuba broker uphumelele kwi inkundla, abe kanjalo ukubuyiselwa amanyathelo afanelekileyo lamagqwetha ke iindleko kwi-Real Estate Imali kwingxowa-Mali I-imirhumo yesebe eqokelelweyo kuba fund dollazi. amahlanu ngonyaka kuba i-real estate iintengiso associate kwaye dollazi. Imirhumo ingaba ahlawulwe ngexesha sokuhlaziya iphepha-mvume. Ezi imirhumo yonyaka ingaba yesebe eqokelelweyo xa zikhona imali drops ngezantsi dollazi. Ingqokelela ngu lumisiwe xa imali ikhona basemazweni eninzi ka-dollazi enye yezigidi, leyo yindlela wagunyazisa umda kuba ingxowa-mali.
Iintlangaaniso Dismissal - Nabasebenzi Guide
Okokuqala, makhe kuthi ukuqonda yintoni i - kwaye ke kusenokwenzeka ukuba izinto ezininzi (njenge resignation kwaye hayi njengokuba iintlangaaniso dismissal) Ke waya kwi state 'uvavanyo yeyona njongo kwaye ke ngoko zombhali kuphela perceptions ka-yabasebenzi asingawo afanelekileyo kulo mbaKwi-Coetzer v I-Ummi Newspaper, kwaye Kruger v CCMA Omnye, kwaba reiterated ukuba iintlangaaniso dismissal ngu kugqitywa objectively kwaye ukuba resignation kufuneka yokugqibela resort.
Kwi-Beets v Ngezifundo ka-Port Elizabeth, yaba kufunyenwe ukuba iintlangaaniso dismissal ngomatshini kuphela ukuba yabasebenzi resigned ngenxa umqeshi ke harsh, antagonistic kwaye hostile ukuziphatha, kwaye omnye umzekelo kwaba igcine ukuba resignation kufuneka ascribed ngenxa yokuba prospect ka-waqhubeka imisebenzi waba intolerable.
Resignation akukho mfuneko yokuba ube yabasebenzi ke kuphela ndlela, kodwa imele ibe kuphela amanyathelo afanelekileyo khetho ukuze ibango lomthetho iintlangaaniso dismissal ukuba waphumelela. Kwimeko apho ezi zinto olwaphulo yi-umqeshi, yabasebenzi enokuba ukhetho nokuba ukuba aphelise nemvumelwano, okanye bamba i-umqeshi ukuba yayo contractual izibophelelo. Oko wenziwe ifumanise ukuba usebenzisa ikhompyutha nanguye nawuphi na umsebenzi we-umqeshi ke repudiation ka-imathiriyali ngokwemiqathango yecandelo nemvumelwano amounted ukuba iintlangaaniso dismissal. Oku repudiation ka-imathiriyali mimiselo aya kuquka ulwandiso ka-ngumqeshwa ngaphandle ahlawule emva umqeshi amava-mali iingxaki, okanye umqeshi ke unilateral reduction ka-yabasebenzi ke yomvuzo ingaba kanjalo kwanela ukuseka iintlangaaniso dismissal.
Akulunganga xa isenzo athathwa yi-umqeshi kanjalo ayikwazi eyiyo a olwaphulo kwaye babe isixa-mali kwi-iintlangaaniso dismissal.
Nangona kunjalo resignation ukuphepha a zoluleko enquiry ingaba na isixa-mali kwi-iintlangaaniso dismissal. Kwi-Van Der Riet v Leisure net Ltd Impilo Racquet Club, yabasebenzi resigned emva ekubeni ngempumelelo demoted njengesiphumo restructuring qeqesho. I-umqeshi ke ukusilela ukubonisana yabasebenzi kwi malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ye-demotion waba mbasa akulunganga, kwaye inike ukutya isiseko soluvo ibango ka-iintlangaaniso dismissal. A demotion kwelinye ityala kanjalo lungelelanisa ibango ka-iintlangaaniso dismissal Ngamanye imicimbi efana ngesondo ungcungcuthekiso, ezibangela ukuba yabasebenzi ke resignation, babe kanjalo eyiyo a iintlangaaniso dismissal. Ukusuka ngentla, kuya kuba ubonile ukuba le indawo iintlangaaniso dismissal ngu enobunzima kakhulu, kwaye kukho akukho nzima kwaye ngokukhawuleza imithetho. Ngamnye meko kufuneka kugwetywa kwi yayo merits, kwaye ngeli xesha kukho i onus umngcipheko kumaqhosha yabasebenzi kwi ekubeni ukuba kuvavanya i-dismissal, abaqeshi kufuneka kanjalo kubekho ngobukho zabo kwaye ukuziphatha ngendlela apho baya ukukhombisa u-abasebenzi. Umzekelo, ndiyivile ka iimeko apho i-umqeshi yenza unilateral tshintsha i-yomvuzo isakhiwo, ezifana ukutshintsha kwayo ukususela ngenyanga umvuzo, ezisisiseko kwaye ikhomishini qho ngonyaka, ngokulula ngenxa yabasebenzi ngu failing ukufikelela kokujoliswe kuko, ayikwazi eyiyo a iintlangaaniso dismissal. Abaqeshi abo unilaterally imposiso yorhwebo lwangaphakathi i isebenza ka-elifutshane kwi abasebenzi kufuneka kanjalo bathabathe qaphela ukuba oku unilateral intshukumo wonge imali ukuze olwaphulo, kusenokwenzeka iintlangaaniso dismissal ngokunjalo. Abaqeshi kwenza kulungile ukuthatha elinolwazi isemthethweni ingcebiso phambi kokuba isithethi kwi nawuphi na umcimbi ukuba abe ufumene i-kuchaphazela kwi imisebenzi isivumelwano ukuze uphephe faced kunye disputes ka-iintlangaaniso dismissal.
Petitioning yindlela yolawulo lwendlela uxoxwe izikhalazo nembambano grievances ukusuka abantu kuzo Abantu ke Republic of China. Petitioners abo luyafuneka ubulungisa ingaba kufika yamen ye-Khawunti umantyi okanye igosa eliphezulu kwaye wambetha a drum ukuba ilizwi zabo grievances. Njengoko enjalo, wonke ezisemthethweni kwinkundla waba nicinge ukuba abe equipped nge drum kuba oku sole injongo Ngamanye amaxesha petitioners ingaba phoselani imizimba yabo kwi-phambili a sedan isitulo wobubingeleli obukhulu esemthethweniXa akukho namnye ongomnye ngomhla nelasekuhlaleni belikwazi uncedo, petitioners ingaba utyelele i-ke empire ke ikomkhulu bafune ephakamileyo esemthethweni ngu-uncedo. Petitioners kwiminyaka yakutsha nje ngamanye amaxesha ukukhangela ubulungisa ngokusebenzisa inkqubo esemthethweni okanye wobulali petitioning bureaus. Nangona kunjalo, abo ukuva ukuba ubulungisa sele eluded nabo rhoqo? utyelele Beirut njengenani lokugqibela resort ukuba awuvumelani nesisigqibo abalawuli kwi age-ubudala hlobo. Phantsi nkqubo, National Public Izikhalazo nembambano Iziphakamiso Yolawulo kwaye wobulali bureaus ka-iileta kwaye unxulumano ('petitioning bureaus') ingaba igunyazise ukufumana iileta, ngefowuni, kwaye utyelelo ukusuka abantu okanye amaqela kwi iziphakamiso, izikhalazo, kwaye grievances. Amagosa ke isiqhagamshelanisi imiba ukuya zahlukeneyo amasebe iliso kwinkqubela phambili septemba, oko ingxelo kwi - filing amaqela. Petitioning bureaus ingaba ostensibly konxibelelwano isiqhagamshelanisi phakathi kukarhulumente kunye citizenry, kwaye zithe relied kwi ukusukela ukusekwa kwe-PAPER ngowe.
Petitioners babe begin zabo nzame kuba redress ngomhla nelasekuhlaleni kunye iileta kwaye unxulumano ii-ofisi, apho zibekwe khona kwi-courthouses okanye township-inqanaba urhulumente ii-ofisi.
Ukuba unsatisfied, banako inyanga legunya ukuba yowiso-inqanaba ofisi kwaye, ngomhla ephezulu umphakamo, i-National Public Izikhalazo nembambano Iziphakamiso Yolawulo kwi-Beirut. Inani petitioners kwi-Beirut yedwa sele allegedly ufikelele ngaphezu kwe, abantu, hayi ukubala abo bahlala e wephondo capitals. uphawulo luyafuneka inani abantu usebenzisa petitioning inkqubo sele ukwanda ukusukela ngo, kangangoko ukuba inkqubo wenziwe strained kuba iminyaka. Igosa leenkcukacha-manani abonisa ukuba uxwebhu lwezikhalazo ofisi ngonyaka kuphethwe jikelele ishumi yezigidi inquiries kwaye izikhalazo ezivela petitioners kwi- ukuya. Nangona kunjalo, nangona yalo ihlala ihleli indalo kwaye ezopolitiko inkxaso, inkqubo ayizange ukuba i-ngobuchule ndlela zokusingatha i-izikhalazo baziswa kulo. Yowiso-capitals zithe umtyholwa ka-hiring abantu Beirut ukuba abduct petitioners abathe travelled ukusuka kwiindawo zabo kwaye umkhosi kwabo ukuya emva ekhaya oku kwaziwa njenge 'intercepting. I-apparent injongo ka-interceptors ngu ukunqanda abemi ukusuka appealing kwi-Beirut ngenxa yobulali amagosa ubuso reprisals ukuba abemi ukusuka kwiindawo zabo bafuna redress kwi-eyinkunzi. Amalungelo oluntu organizations kuba umtyholwa Isitshayina abasemagunyeni ka-arbitrarily imprisoning enkulu amanani petitioners kwi-mnyama jails okanye ezinye illicit detention oluntu. Ngo, Amalungelo Oluntu Jonga ekhutshwe ingxelo alleging ukuba enkulu amanani petitioners, kuquka abantwana, ingaba detained kwi-mnyama jails, kwaye ibhalwe phantsi eziliqela allegations ka-torture kwaye mistreatment kulo maziko.
Usapho Umthetho kwi-China
abo ufuna ukufumana watshata kwi-China okanye ufuna nkqu kokuqwalasela ukuseka usapho apho, kufuneka sazi njani usapho ubomi ilawulwa ngumthetho kwaye yintoni amalungelo kufuneka kwi-Chinaingaba baba compulsory kwi-China, ikakhulu ngenxa yokuba abanye couples baba ukungahoyi inkqubo esemthethweni iimfuno sokubhalisa kunye kuphela lwenziwa eziqhelekileyo wedding. I-mtshato uza uqwalaselwe-boolean kwi-China, ukuba iimfuno zomthetho kuba ubuncinane neminyaka engama - amaqabane asingawo kuhlangatyezwana nazo okanye ukuba omnye amaqabane sele watshata. I-revisions ukuba Umtshato Umthetho lwenziwa ngowe- kanjalo olubuyiselweyo indlela contested wokuqhawula umtshato.
Utshintsho baba kanjalo omiselwe ngumthetho i-ngokwandisa bezinga wokuqhawula umtshato kwi-China yi-emva kwexesha s.
Wethu, unako ukunceda wena kunye neenkqubo zomthetho ukumelwa ngexesha wokuqhawula umtshato okanye ukuba ufuna isemthethweni uncedo kuba ukwahlulwa matrimonial impahla yexabiso ngexesha wokuqhawula umtshato. okanye omnye-umntwana umgaqo-nkqubo njengoko kwakunjalo ekubhekiswe kuye kwaba ungeniswa kwi-China kuba Isitshayina abavela kumazwe angaphandle. Kwiminyaka edlulileyo, imigaqo relaxed kwaye couples abo babengengabo unayo nayiphi na abantwana bakokwenu kwabo kwakukho bavunyelwe ukuba ingaba u-abantwana. I-Uqala inkampani kwi-China kusenokuba nzima ukususela oko ibandakanya enjalo complex nemigaqo-nkqubo Eli qela ukususela abaqondisi-mthetho-China. net kakhulu umntu kwaye izibonelelo ukusuka kofakwano iinkalo zobuchule kule ndawo.
Ukubalwa akulunganga dismissal imbuyekezo - Royds Withy Ukumkani Solicitors
Ngomhla omnye kweyomsintsi yowama- Withy UkumkaniLLP
Lungisa kunye Royds LLP Zonke iziqulatho ekhutshwe phambi kweli umhla uza kuhlala igama firms phambi-ukudibana Kwi-Countrywide Ilifa Agents nabanye v Turner i-KUDLA sele overturned i-Imisebenzi Isigqeba isigqibo esiphathelele indlela apho Claimant ke compensatory kweelwimi kuba ngempumelelo iintlangaaniso akulunganga dismissal ibango waba ibalwa ngokusemthethweni. Enkundleni yamatyala sele wrongly ukuba igcine Kwi-Countrywide Ilifa Agents nabanye v Turner i-KUDLA sele overturned i-Imisebenzi Isigqeba isigqibo esiphathelele indlela apho Claimant ke compensatory kweelwimi kuba ngempumelelo iintlangaaniso akulunganga dismissal ibango waba ibalwa ngokusemthethweni
URHULUMENTE UBUNINI kwi-China - Bulgarian-Isitshayina Kwegumbi of Commerce
Nangona urhulumente wenziwe kwaziswa nokuphumeza ukuba ezahlukeneyo amaqondo reforms ostensibly intended ukuvumela kwimakethi inyanzelisa ukuba thatha ingene dlala, urhulumente ubunini ihlala widespread kwaye varied
Ubunini kwi-thengisa mbasa ebalulekileyo (strategic okanye pillar imizi-mveliso) sele traditionally sele agciniwe kuba Isitshayina korhulumente.
Nangona engqongqo yokuba zilawulwe kuba Urhulumente ubunini sele formally sele eased, kukho luhlala eyakhelwe-ngaphakathi bias ngakulo Urhulumente ubunini, njengoko wachaza ngakumbi inkcukacha kwizahluko ezintlanu ne.
Kwi-umahluko, ukwahlula phakathi domestic kwaye langaphandle kubaluleke kakhulu clearer, kunye ethile regimes kwaye izithintelo nokufaka isicelo iinqwelo-invested iinkampani.
China ubani imbali attracting langaphandle iteknoloji yi-ukuvumela langaphandle, utyalo mali kwi-ethile ngamacandelo, kwaye ngoko ke, musa ukuvumela okungaphaya amangeno xa requisite iteknoloji wenziwe transferred kwaye Isitshayina ishishini sele kuba competitive. Ngexesha elinye, amakhonkco phakathi Urhulumente kwaye uqoqosho yiya ngaphaya mere mashishini. I-Isitshayina uqoqosho ngu-ngaphezu kwe-complex elula ukwahlulwa 'private' kwaye 'imeko-owned'. Amaxesha amaninzi, ngasese owned iinkampani kuba vala amakhonkco ukuba urhulumente, ingakumbi ngenxa elicebo ukubaluleka iimveliso zabo. amashumi amabini uwaphinda -enye I-imigca phakathi ezi iinkampani ingaba rhoqo blurred, owenza kube nzima ukuba classify Isitshayina firms ngokunxulumene mashishini. Umzekelo, iinkampani ezininzi ukuze zahlulwa njengoko private ngqo consist ka-mixed ubunini, kwaye esidlangalaleni ezidweliswe iinkampani kwi-China ingaba ngokuqhelekileyo oku uhlobo. Ngexesha elinye, esiqhelekileyo SOEs kuba undergone okanye xa inkqubo corporatization (khangela kanjalo Isahluko se-). Isitshayina inkampani ingqokelela yamanani ingaba ngokusekelwe registration data. Nangona kunjalo, iinkampani ayisayi akuyomfuneko ukuba ibe yindlela ebhalisiweyo kwi-udidi ukuba ubonisa ultimate mashishini. Ngoko ke, ngexesha elithile, iintlobo Urhulumente impembelelo pertain kuphela SOEs, ukuziqhelisa kunye SOEs kwaye inkulu private iinkampani share ezininzi similarities kwi kwiindawo commonly wayecinga ukuba distinguish SOEs ukususela ngasese owned iinkampani: ukufikelela kwimakethi, emveni kokufumana Urhulumente nezibonelelo, proximity ukuba Urhulumente amandla, kwaye uphumezo urhulumente ngu-nkqubo iinjongo. amashumi amabini eneneni, ukususela ukwaziswa 'Ezintathu Umele' Ngumongameli Jiang Zemin ngofebruwari wama, private entrepreneurs zithe yamkela njengoko amalungu CCP, njalo acknowledging kwaye facilitating zabo indima ebalulekileyo ekuncedeni ukusebenzisa Iqela njongo.
amashumi amabini anesithathu Kukho kanjalo iingxelo ukuba urhulumente, ngokusebenzisa yenza 'ekhethekileyo ulawulo izahlulo', pushing eminye yayo likhulu private tech iinkampani ukunikela Urhulumente unesabelo naye kubo kwaye ngqo indima ebalulekileyo corporate izigqibo nineteen Chen, G.
China ke Ilanga PV nemizi-mveliso kunye Nezibonelelo ukususela Imbono Yombuso Capitalism, i-copenhagen Journal of Asian Uphando, p. amashumi amabini uwaphinda-World Bank kwaye Uphuhliso Nophando Umbindi Yombuso Ibhunga, P. R.-China China: Ukwakha isizwe bale mihla, Harmonious, kwaye Creative Society.
Tips for Renting i-Apartment kwi-China
Nazi ezintlanu iincam ukunceda wena xa renting i-apartment
Kwezinyanga zilishumi elinanye leminyaka ndine rented ezintandathu apartments kwi-ChinaQaphela - Eli nqaku kwathiwa ngokusekelwe wam kunye namava abahlala Zhuhai isixeko.
Umzekelo idipozithi leyo isixa-mali kwaye i-arhente ikhomishini zingangahambelani kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo kwaye amahlanu omnye ngenyanga njengoko ndiya umzekelo-icatshulwe apha.
Ngokusemthethweni zonke landlords kwi-China ezifunekayo ukuze ubhalise zabo yerente iimpahla kunye karhulumente (kwaye uhlawule yerente irhafu kunjalo). Njengoko kunye kwento yonke kwi-China yintoni ngokusemthethweni kufuneka ayikho yintoni commonly practiced. Uninzi landlords musa ufuna ukuba ahlawule yerente irhafu.
Ukuba baye kwenza imali kuba oku baya kudlula iindleko kwi kuwe nge-charging ephakamileyo kukrazulwa.
Kanye iindleko kuxhomekeke apho isixeko uhlala kwi kwaye ubungakanani apartment. Ngokubanzi ke ezimbalwa anamashumi yuan ngenyanga. Xa Isitshayina landlords kukrazulwa ukuba Isitshayina tenants i-apartment uza kuyanqaphazekaarely kuba ebhalisiweyo kwaye oku kuyanqaphazekaarely yenza nawuphi na iingxaki. Nangona kunjalo xa renting ukuya foreigner oku unako ukufumana ngakumbi enzima. Uninzi Isitshayina landlords andazi malunga nale ngxaki ukuba baya kuba zange rented ukuya foreigner phambi kwaye amaxesha amaninzi wenza misunderstandings. Uninzi ipropati agents abakhoyo hayi osetyenziselwa besebenza foreigners andazi ngalento noba (okanye bamele nje anomdla yokufumana a yaba made kwaye ukufumana ikhomishini, baya musa care kwenzeka ntoni emva kokuba). I-complication ngu yintsholongwane yokuba njengokuba foreigner kufunwa ukuba ubhalise yakho yokuhlala kunye wobulali amapolisa sovavanyo ezingama- iiyure (hotels iya kukwenza oku ikhutshwe egameni lakho, yiyo kuthatha ngoko ke ixesha elide ukukhangela-in). Oku ubhaliso iphepha ezifunekayo kuba ngokwenza izinto ezininzi kwi-China ezifana nokufaka umsebenzi visa (yokuba ngumhlali) okanye abaqhubi umfanekiso yephepha-mvume. Ngokukhawuleza njengokuba usenza oku ubhaliso amapolisa iza ngokukhawuleza jonga wena yakho landlord ukuba apartment ayiyo ebhalisiweyo yerente apartment. Trouble kusenokuba kulindeleke kuba zombini kuni ukusuka ga phambili.
Ukuba ufaka kwi-China kwi tourist okanye ishishini visa ube ulingeka ukuba tsibela nokubhalisa yakho yokuhlala kodwa le asiyiyo elicetyiswayo.
Ngamanye amaxesha amapolisa kuza kwenza jikelele inspections kwaye ungakwazi ukufumana ngokwakho kwi-trouble ukuba bayaphila kwenye indawo ngaphandle nokubhalisa. Yakho landlord uza kanjalo kusenokwenzeka ukuba kufuneka ahlawule omkhulu fines okanye bribe omnye umntu ukuba zabo apartment ayikho ebhalisiweyo njengokuba yerente ipropati. Ngokuqinisekileyo baya kananjalo kufuneka ubhalise ngayo emva yokufumana ibambe kwaye baya ufuna nyusa kukrazulwa ukuba iquke oku iindleko. Oku kwenzeka kum lokuqala apartment Mna wahlala. Mna wala ukuba ahlawule ezingaphezulu kukrazulwa kwaye landlord wala ukuba ahlawule sokubhalisa apartment e eyiyeyakhe iindleko ezinokufumaneka. Wam-miyalelo waba ukuba yayiyeyona isemthethweni yokuba zilawulwe kwaye ngokupheleleyo uxanduva lwakhe. Yakhe isiphumezi-miyalelo waba ukuba andizange wamxelela mna luyafuneka ngayo xa sifuna esayiniweyo nemvumelwano. Kwi end mna wamxelela ukuba ndino ukusa phandle ukuba wayengenako ngokusemthethweni kukrazulwa i-apartment kum ngexesha ixabiso kuchazwe kwi-zengqesho. Yena balingwe ukugcina idiphozithi kodwa mna wamxelela ukuba waye omnye ukuphelisa isivumelwano, hayi kum. Thina bobabini iselwa stubborn malunga nayo kwaye mna-sat apho kuba - iiyure refusing ukushiya de wabuyela wam idiphozithi. Kwi end wathi ekugqibeleni wabuyela wam idiphozithi emva kokuba mna wacebisa ukuba thina biza amapolisa. Amapolisa baba sele ngomhla wakhe meko kuba renting i-ayibhaliswanga kwi apartment kwaye lowo ngokuqinisekileyo ungafuni ukufumana kwabo ngakumbi obandakanyekayo. Kukho enye indlela ukubhalisa yakho yokuhlala xa ufuna abahlala i-apartment ukuba ayikho ebhalisiweyo yerente apartment. Ukuba yakho landlord yakho 'umhlobo' kwaye unoxanduva 'hayi ukubhatala kukrazulwa' ngoko apartment ayikho kufuneka ibe ebhalisiweyo njengokuba yerente. Nje qiniseka ukuba wena phawula ilungelo ibhokisi kwi yokuhlala ifomu yobhaliso ukuthi ukuba ufuna bayaphila ekhaya ka-umhlobo okanye isizalwane endaweni renting.
Uza kanjalo kufuneka ubhale igama kwaye ID ikhadi inani ongumhlobo wakho ngubani ikuvumela ufuna ukuhlala kwiindawo zabo apartment for free.
Ukuba wenza isigqibo ukuya ngale ndlela ukumbule ukuba uphumelele ukuba nako kufuna isemthethweni uncedo ukuba yakho landlord umhlobo okunqanda yakho yerente sivumelwano.
Iingxaki kusenokuba avoided ukuba kunye nawe kwaye yakho entsha landlord ukuyiqonda le miba phambi ukusayina isivumelwano. Ukuba yakho esikolweni okanye umqeshi ngu ukubhatala yakho kukrazulwa ngoko uza kusenokwenzeka ukuba kufuneka Isitshayina izinto ezithengiweyo ezirhafelwayo.
Yakho landlord uza kanjalo kufuneka abhalise apartment njengokuba yerente ipropati njengoko kuchaziwe ngasentla ukuze ufumane fapiao kodwa hayi enye indlela jikelele.
Uyakwazi bhalisa i-apartment njengokuba yerente ipropati kwaye ahlawule yerente irhafu kwaye hayi mba a fapiao kodwa awunokwazi mba a fapiao ngaphandle nokubhalisa i-apartment njengokuba yerente ipropati. I-yerente irhafu kunye fapiao tax (VAT) zahlukile iintlobo ezininzi ezonakeleyo irhafu. Zombini yerente ipropati ubhaliso kunye fapiao kuba kwezabo enxulumene taxation iindleko apho kuya kuba sele idlule kwi kuwe nge-ephakamileyo kukrazulwa. Uyakwazi silindele ukuba ahlawule jikelele, amakhulu amahlanu yuan ezingaphezulu ngenyanga kwi, ngenyanga apartment kuba ezi zimbini iirhafu ukuba ufuna a fapiao. Khangela nabaqeshi benu nokuba uyakwazi abanike ezinye fapiaos ukuba iquke yakho kukrazulwa. Umzekelo nsnp, ukhenketho, petrol, grocery inqwelo, njalo-njalo. unako rhoqo kusetyenziswa endaweni fapiao ukusuka yakho landlord. Ukuba wenza kufuneka fapiao ukusuka yakho landlord ngoko uyakwazi rhoqo ngaphandle kokuba iindleko nge kuphela yokufumana fapiao kuba isixa-mali ukhuselwe umqeshi wakho. Umzekelo ukuba umqeshi wakho sijongana ukuya kwi, yuan ngenyanga kodwa yakho kukrazulwa ngu, yuan ngenyanga ke zibalisa yakho landlord ukuba udinga nje a, yuan fapiao nto cheaper kuno, yuan fapiao. Esezantsi i-arhente imali ufumana amashumi amahlanu inyanga enye kukrazulwa kodwa ngathi phantse yonke into enye into kwi-China lento negotiable.
Mna kuba zange wahlawula epheleleyo amahlanu, ndiya kuba nkqu ihlawulwe njengoko abancinane njengoko amabini.
Uninzi ipropati agents iya kuba ndonwabe ukwenza wabucala yaba ngaphandle iincwadi zabo ukusuka inkampani ye-amabini. Baya get ngaphantsi oku kunjalo ukuba ikhomishini uyaya yabo inkampani. Oku kunjalo kakhulu unethical kodwa nangona kunjalo ke iselwa ethandwa kakhulu. Ukuba ufuna ukuba abe nangakumbi unethical uyakwazi rhoqo ukufumana kwi-qhagamshelana ne-landlord ngqo kwaye bypass iarhente ngokupheleleyo. Oku asikuko elicetyiswayo ngenxa yokuba abo agents nzima (ubuncinane kwi-bam meko baba nzima ngenxa mna idla jonga akukho ngaphantsi amahlanu apartments kunye ezininzi agents phambi igqiba) kwaye baya deserve to kuhlawulwa.
Ungafumana izinto azifani kwezinye izixeko
Uyakwazi zama ukufumana i-apartment ngaphandle iarhente kodwa lento nzima kakhulu. Nangona zininzi Isitshayina websites apho landlords unako ngeposi zabo apartments ezimbalwa kakhulu ngokwenene wenze oku.
Uninzi ezikhoyo apartments unako kuphela kufumaneka nge-agents.
Ndinqwenela ngakumbi landlords ingaba i-zabo rentals kwabo, oku kunokwenziwa ngaphandle kwabo imali kakhulu (nee-arhente kanjalo bathabathe amashumi amahlanu inyanga enye kukrazulwa ukususela landlord). Esezantsi idiphozithi ingaba kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo kukrazulwa kwaye kukrazulwa soloko ihlawulwe kuba zilandelayo ngenyanga.
Oko kuthetha ukuba idla kufuneka ahlawule.
kwiinyanga ezintlanu kukrazulwa xa kufuneka atyikitye isivumelwano (iinyanga idiphozithi, yokuqala inyanga kukrazulwa, iarhente ke ikhomishini). Isibini inyanga idiphozithi ayikho idla negotiable, ingakumbi ukuba apartment ngu furnished. Kuba i-unfurnished apartment uyakwazi rhoqo argue ukuba kuphela inyanga enye kuyimfuneko. Musa tyhiliza eli kakhulu kakhulu nangona kungenjalo landlord babe worry ukuba awunokwazi afford ukuba ahlawule kukrazulwa kwi ixesha ukuba awunokwazi afford kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo idiphozithi. Ke ngcono ukuze uhlawule ngokupheleleyo idiphozithi kwaye ugqaliso yakho negotiating kwi ukuthelekisa kukrazulwa. Ezi zezinye ephambili tips for ukufumana elikhulu yaba. Ukuba inkampani yakho ngu ukubhatala kuba yakho apartment okanye wena musa ukususa inkunkuma ixesha ukufumana enkulu, yaba ke tsibela eli candelo. Njengokuba foreigner unengxaki enkulu luncedo ngaphandle kukhankanywe ngasentla complications.
Uninzi Isitshayina landlords ndiyakuthanda kukrazulwa ukuba foreigners kwaye iya ezantsi zabo ixabiso ukuze wenze oku.
Uza nkqu isaziso ezininzi ads ngokukodwa uthi 'kuphela foreigners, Hong Kong, kwaye Jordan tenants' ingakumbi ephakamileyo end apartments. Ukuba landlord owns a, yuan ezintathu bedroom apartment ucinga ukuba babeya ngenye kukrazulwa yona kuphela foreigner okanye Isitshayina usapho. Rhoqo landlords care vetshe malunga ukukhusela zabo-mali kunokuba besenza malunga kukrazulwa. Foreigners kuba reputation ka-ukugcina apartments coca kwaye ukubhatala zabo kukrazulwa kwi ixesha. Ukuba unayo elungileyo ipropati iarhente baya kukunceda ukudlala lo phezulu kwaye convince the landlord ukwamkela ngaphantsi kwe-avareji kukrazulwa. Mna yiba soloko ihlawulwe kakuhle ngezantsi yentengiso-avareji kuba bonke wam apartments nkqu nokuba andinguye ingakumbi coca kwaye ndiya rhoqo musa imali yam kukrazulwa kwi ixesha. Ke malunga reputation ngaphezu nantoni na ongomnye. Oku imisebenzi engcono ukuba unayo mhlophe imigca enqamlezeneyo kwaye kuza ukusuka elungileyo kweli lizwe. Akunyanzelekanga ukuba zithetha ukuba isandi racist, lonto nje indlela kubalulekile.
Emva ukhangela kwi ezimbalwa apartments kufuneka enze ezinye low-ibhola inikezela.
Ngexesha lokuqala iarhente kuthi ukuba ixabiso engenakwenzeka kwaye kuba reluctant ukuba nkqu ukwenza ngolo kunikela.
Baxelele ukuba umnxeba i-landlord kwaye ndithi baya kuba foreigner ngubani kakhulu anomdla kodwa unako kuphela ahlawule nantoni na yakho kunikela. Ukulungele ukuhlasela surprised, abanye landlords kuya kunikela, ingakumbi ukuba apartment wenziwe zingenamntu ixesha elide. Nkqu ukuba babe musa ukwamkela kunikela ngokwenza oku ufuna ikuvumela iarhente uyazi ukuba uza kuphela kukrazulwa i-apartment ukuba baya kufumana kuwe elikhulu yaba. Xa baye baqonde oku baya nzima ukufumana enye. Baya yima wasting ixesha lakho ebonisa kuwe apartments ezingekho mnandi okanye overpriced kwaye baya kunibiza ngoko nangoko xa omtsha apartment iza kwiindawo zentengiso ukuze babe ukuba ufumana elikhulu yaba okanye ukuba babe nokwazi landlord ngu eager ukuba kukrazulwa i-apartment ngokukhawuleza. Ezi ipropati nee-arhente ingaba crowded kunye indlela zininzi kakhulu agents kwaye ngabo bonke desperate for kwishishini lakho. Ukwenza kwabo nzima ngenxa yabo imali. Ngoku ukuba wena neqabane lakho landlord ukuqonda ngokucacileyo yintoni efunekayo kwaye kulindeleke ukusuka kwicala ngalinye kwaye kufuneka negotiated elincumisayo lokugqibela inyathelo kukuba kuba okulungileyo zengqesho. Ungaze usebenzise isivumelwano kuvunyelwa ngumthetho i-arhente okanye landlord kwaye zange umqondiso na isivumelwano ukuba wena musa ukuqonda.
Kufuneka usoloko yenza eyakho isivumelwano kwaye shicilela ezimbalwa iikopi ngayo xa sihamba ukuhlangabezana landlord ukuba atyikitye zengqesho.
Kumele ibe kuzo zombini Isitshayina kwaye isingesi.
I-English yinxalenye nje kuba kuyo ngoko uyakwazi ukuqonda oko ngenxa izivumelwano ngesingesi engekho semthethweni phantsi Isitshayina umthetho.
Uzimisele ukuhamba-hamba kude yaba ukuba babe insist kwi-hayi usebenzisa yakho zengqesho.
Ndingathanda ukwabelana wam owakhe isivumelwano kunye nawe esibizwa ekuqaleni ngokusekelwe a poorly iguqulelwe Isitshayina zengqesho. Kwiminyaka edlulileyo mna ndenza utshintsho ukuphucula ngayo (kuba mna, hayi landlord) ukwenza izinto ezininzi cacisa (ezifana abo ifuna ukuhlawulela ulungiso). I-English ayikho enkulu kodwa ke understandable kwaye ke Isitshayina ukuba kubaluleke ngakumbi ebalulekileyo. Fumana ikopi wam isivumelwano apha Ulungiselelo ngu-Microsoft word, ungahlela ukuphucula yona isuti eyakho iimfuno. Ndiya kunika le njengomzekelo kuphela, ndiya kuthabatha akukho xanduva imixholo kuyo. Ukuyisebenzisa e eyakho umngcipheko Ndikunqwenelela ithamsanqa kwixesha lakho apartment hunting.
Ukuba unayo nayiphi na izimvo okanye eyakho iincam nceda shiya bona ngezantsi.
Ndinguye ngako oko kufuneka inkonzo kwaye uza kukubonelela nge isiqulatho simahla. Ukuze wenze oku, nceda qaphela ukuba ufuna ukuthenga iimveliso okanye iinkonzo emva unqakraza amakhonkco kule website, ndiya, uninzi (kodwa hayi zonke) amatyala, kufumana kwento nomgaqo-psc. Oku kunjalo, ndiya zange iindleko kuwe nantoni na isithuba. Kwaye abaninzi iimeko ndine negotiated ezikhethekileyo discounts okanye bala codes ayifumaneki kwenye indawo.
Wam imbono kukuba kunikela ngaba eyona kunokwenzeka uya kufumanisa ezikhoyo kwaye mna kuphela recommend iimveliso neenkonzo ukuba ndisebenzisa ngokwam kwaye baya recommend ukuba bahlobo bam.
Ndinguye rhoqo ndonwabe ukuva ingxelo malunga le webhusayithi kwaye iimveliso neenkonzo elicetyiswayo kuyo. Uzive ukhululekile thuma mna i-imeyili okanye incoko nam kwi bhokisi ongezantsi ekhohlo ukuba ndiza apho.
China Yovavanyo Lawyer
Uninzi abaxhasi ingaba bamazwe angaphandle kwaye iinkampani
Siyi-China yovavanyo lamagqwetha Kubalulekile ukuqonda Yovavanyo attorneys kufuneka nolwazi, amava, ezinkulu communications izakhono kwaye thorough ukuqonda iqela kwezigqibo dynamics kwaye persuasionKwi-yovavanyo senzo a misstep unako end kunjalo, ngoko ke ekubeni a yovavanyo lamagqwetha ngubani owenza yakhe yovavanyo debut zibe ezinobungozi, ingakumbi kwi meko involving substantial umonakalo othe. Elungileyo yovavanyo lawyer soloko ukucinga eziliqela amanyathelo ozayo. 'Yintoni ukuba u -' ityala kufuneka zisemaphini ngaphandle ixesha elide phambi yovavanyo iqala. Olukhulu yovavanyo abaqondisi-mthetho ingaba ilungile kuba surprises kwaye iya kuba ezilungiswe kakuhle, phantsi yokugqibela inkcukacha. Kanye yovavanyo iqala, kwicala ngalinye liya kunikwa ithuba kuba ivula zemali kwaye lento apho abaninzi yovavanyo attorneys kuqaqambe.
Bathi abaninzi kunjalo wenziwe uphumelele okanye ezilahlekileyo kwi-ukuvula ingxelo, ngoko ke kubalulekile imperative ukuba amazwi abe nomdla, zombini zabo intsingiselo yawo kweenkonzo.
Cinga yakho intlanganiso yokuqala kunye yovavanyo lamagqwetha, baba nawe impressed okanye aye kwintlanganiso shiya ngaba ucinga ukuba lamagqwetha waye yaneleyo amava okanye imfundo. Ukuba uyazi ukuba yakho meko babe hamba yovavanyo, ufuna umntu lowo uza impress i-jury ukususela ekuqaleni ilizwi lokuqala isivakalisi kwaye uza kukwazi ukulawula imeko yakho yoncedo. Yovavanyo abaqondisi-mthetho amele abaxhasi abakwicandelo litigation, kunye zasekuhlaleni kwaye, ulwaphulo-mthetho.
Ulwaphulo-mthetho abaqondisi-mthetho babe amele plaintiffs okanye defendants, 'abantu, okanye umtyholwa.
Zasekuhlaleni litigators thatha icala iqela kwi-imbambano akukho apho ulwaphulo-mthetho ubizwa obandakanyekayo.
Esa kundoqo luhlomle kuwo ifumaneka simahla
Inkqubo yovavanyo lawyer ke umsebenzi wenziwe persuade a jury ka-iinyaniso kwi meko, kwaye ukubonisa nabo kwi-indlela ukuba eyona ixhasa zabo umxhasi ke indawo. Ngasinye ka-ubungqina kufuneka zaziswe kwaye disputed ngokunxulumene a enobunzima ka-misela imithetho. Ngosuku iintsuku ngaphandle wenkundla, yovavanyo abaqondisi-mthetho kovavanyo iifayile kwaye cwangcisa ii-odolo, qhagamshelana amangqina, thatha depositions, kwaye yathetha kubathengi bethu. Kwi inkundla imihla, China yovavanyo abaqondisi-mthetho argue izindululo zokuphela, bahlangana kunye lwabagwebi, lungisa cwangcisa ii-odolo, khetha jurors, kwaye argue amatyala. Ukulungiselelwa kuba yovavanyo banokuthatha kwiinyanga ezininzi. Ngenxa tremendous iindleko litigation, nangona kunjalo, uninzi iimeko settle phambi kokuba ngonaphakade zifikelele linge. Yovavanyo umthetho ufuna ezibalaseleyo analytical lwezakhono. Litigators sebenzisa zabo ulwazi isemthethweni precedents ukuba nokuchaza i probable sikazwelonke ka-kunjalo. China Lawyer Hetalia uza kwentlawulo nawe phantsi ingingqi yakho iimeko ngendlela elandelayo iintlobo: Iiyure imali amalungiselelo Contingency imali amalungiselelo Cambalala imali amalungiselelo Ipesenti imali amalungiselelo ndingumntu iphepha-mvume China lawyer. China Lawyer Hetalia kuba associates kwi-Beirut, i-shanghai, Tianjin, Guangzhou, Suzhou, Nanjing, Qingdao, Fuzhou, Hainan, Hefei, Wuhan, Xian, Changsha, Xiamen kwaye Hangzhou. Funda Ngakumbi Esi-China Lawyer Hetalia ngu aiming ekuhlaleni ngokubonelela ngcono ulwazi ukuqonda Isitshayina umthetho kuba foreigners. Kufuneka unayo nayiphi na isemthethweni mba kwi-China, ufowunele uqhagamshelane ne-China Lawyer Hetalia kuba luhlomle kuwo. Ezinye isemthethweni inkonzo, nangona kunjalo, ndiya kuba ibe igcwalisiwe kwi-ngenxa umyinge kwaye ngenxa kunjalo.
Upetros Zhu, i-experienced China lamagqwetha iphepha-mvume ukuba senzo umthetho kuba ngaphezu iminyaka elishumi, umbhali eli-China Lawyer hetalia, yamkela nayiphi na enquiry okanye luhlomle kuwo enxulumene Isitshayina umthetho.
Beirut Apartment Villa-Ofisi ye-Ziyathengiswa kwaye kuba yotyalo-Mali
Nomthengisi bafanele ukubonisa akahlawuli i-stamp irhafu
Baninzi ngakumbi iimpahla ezikhoyo kunokuba ezidweliswe kule iwebhusayithi. Ukuthenga i-ipropati kwi-China, non-Isitshayina ubani kufuneka ube notarized Isitshayina igamaKuthatha - iintsuku ukufumana oko kwenzeka Beirut ngumntu naye herself kunye incwadana yokundwendwela. Yakho Isitshayina igama unako kanjalo kuba notarized kwi-Isitshayina embassy kulo ilizwe lakho. Uyakwazi gunyazisa umntu ukuba atyikitye isemthethweni amaxwebhu kuba ufuna ukuba awukwazi kwenzeka China okanye ukuhlala kwi-China kuba ixesha elide. I-ileta yogunyaziso ifuna ukuba ube notarized yakho kweli lizwe ke Isitshayina embassy okanye kwi-China. quka zintathu stamp izinto ezimbini ulondolozo-mali kuba ephambili iimpahla, kwaye. zintlanu isivumelwano irhafu kunye omnye stamp irhafu kuba kuthengwa iimpahla.
Kanjalo connects ngamazwe izikolo ngamazwe imfundo pursuers
Unako ukuthumela USD ukuba i-personal-akhawunti kwi-China ukusuka oversea kuba yokufumana ingxowa-mali-China. Kuba ithumela USD ukuba overseas nge-Bank of China, iindleko ingaba njengokulandelayo: Ukuba ufuna ukuthumela ngaphantsi USD ngosuku ukuba overseas, kufuneka nje unike incwadana yokundwendwela. Ukuba uthumela ngaphezu USD ngosuku, kufuneka anike irhafu intlawulo kokuba zifunyenwe okanye umvuzo ingeniso liqinisekise kwi-China. Kuba overseas abatyali-mali lowo ufuna kukrazulwa zabo iimpahla ukuba tenants, kubalulekile isebenziseke ukuvula i-akhawunti ebhankini kwi-kwimizi-Mveliso Abarhwebayo Bank of China yokwamkela rentals. Unga khangela i-akhawunti ebhankini ke kwi-manani inkonzo: Fortnightly Ngqo-Manani Repayment: Ooduladula -veki zonke repayments yenza ukuba ufuna ukugcina ngaphezulu imali-mboleko inzala kunye shorten-mboleko yakho umhlaba. Umthengi agrees kwi-bethenga propati, imiqondiso Umthengi Uqinisekiso Sivumelwano kunye iarhente, kwaye yenza ukuqeshwa kunye nomthengisi bafanele ukubonisa ukutyikitya i-bethenga sivumelwano. U-amaqela atyikitye tripartite sivumelwano Umthengi akahlawuli nomthengisi bafanele ukubonisa i-bethenga idiphozithi, apho kufuneka zigcinwe yi-iarhente njengenxalenye bethenga intlawulo, kwaye kunikwe nomthengisi bafanele ukubonisa yi-iarhente ekupheleni bethenga nkqubo. Phezu ukusayina isivumelwano, iarhente umhombandlela nomthengisi bafanele ukubonisa kwaye umthengi malunga kuyimfuneko amaxwebhu ukugqibezela intengiselwano (bona icandelo umgaqo-nkqubo kuba iinkcukacha) iarhente umhombandlela nomthengisi bafanele ukubonisa kwaye umthengi ukuya bank ukuba imiba imali-mboleko okanye ipropati exchange icandelo inkqubo-propati ubunini unikezelo. Iarhente accompanies umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuya loaning bank ukuba isicelo mortgage imali-mboleko ye-bethenga okwesibini isandla iimpahla, nokuzalisa phezulu ze atyikitye maxwebhu, isiqinisekiso, amaxwebhu kwaye yogunyaziso iileta, njalo-njalo. I-bank iya kukhupha i Isiqinisekiso Ileta nganye nganye Mortgage imali-Mboleko ye-Okwesibini Isandla Iimpahla. Leta ibonisa ixabiso kwaye ixesha imali-mboleko Umthengi efakwa ebhankini phantsi intlawulo kuba ukuthenga i-ipropati kwi-bank. Iarhente yenza amalungiselelo kuba umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuya Realty Intengiselwano Isebe kunye inkqubo-propati ubunini unikezelo.
Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa uzalise Ipropati Bethenga Ifomu Yobhaliso, Ipropati Uthengisa Ifomu Yobhaliso ngokulandelelana kwayo, kwaye ifayile Propati Ubunini Isiqinisekiso kwaye iikopi amanye amaxwebhu.
I-Realty Intengiselwano Isebe liya kukhupha i-Realty Transferring Umhla Isaziso. I-transferring umhla iyaguquguquka kuxhomekeke ezahlukeneyo realty intengiselwano amasebe. Iarhente accompanies umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuya realty intengiselwano isebe kwi-umhla eboniswe kwi Isaziso i-Realty Transferring Umhla. Umthengi akahlawuli nemvumelwano irhafu kunye stamp irhafu, kwaye unika irhafu ukubhatala receipts ukuba iarhente. Iarhente inika umthengi ke irhafu ukubhatala receipts ukuya bank. Zingaphelanga iintsuku ezintathu emva koko, iarhente kuthatha umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuba i-bank ukuba unikezelo imali-mboleko kwaye umthengi ke phantsi intlawulo nomthengisi bafanele ukubonisa ngu-akhawunti. Ngomhla we-ngemini enye emva intlawulo ukukopa, iarhente kufuneka ahambe umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuba ipropati ulawulo ukuze uzalise i-akhawunti unikezelo kuba ipropati ulawulo, heating, amanzi, umbane negesi imirhumo, njalo-njalo. Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa umqondiso-Propati Handing Phezu Isaziso. Nomthengisi bafanele ukubonisa inika ipropati iqhosha umthengi. Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ahlawule wavuma inkonzo imirhumo ukuba iarhente. Iarhente yenza amalungiselelo kuba umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuya Realty Intengiselwano Icandelo ukuqhuba ipropati ubunini unikezelo. Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa kufuneka uzalise Ipropati Bethenga Ifomu Yobhaliso, Ipropati Uthengisa Ifomu Yobhaliso ngokulandelelana kwayo, kwaye ifayile Propati Ubunini Isiqinisekiso kwaye iikopi amanye amaxwebhu.
I-Realty Intengiselwano Isebe ngemiba i-Realty Transferring Umhla Isaziso.
I-transferring umhla iyaguquguquka kuxhomekeke ezahlukeneyo realty intengiselwano amasebe. Iarhente accompanies umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuya realty intengiselwano isebe ngokunxulumene umhla kwi Realty Transferring Umhla Isaziso. Umthengi inika bethenga intlawulo kungabandakanywa phantsi intlawulo nomthengisi bafanele ukubonisa. Ngomhla we-efanayo usuku intlawulo ukukopa, iarhente uyaya kunye umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ukuba ipropati yolawulo kwicandelo zithengiswe ipropati ukuba uzalise i-akhawunti unikezelo kuba ipropati ulawulo, heating, amanzi, umbane negesi imirhumo, njalo-njalo.
Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa umqondiso-propati handing-phezu uxwebhu.
Nomthengisi bafanele ukubonisa inika isitshixo propati ukuba umthengi. Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ngoku kufuneka ahlawule wavuma inkonzo kugunyaziwe iarhente. Kuba abantu abo awunayo i-Beirut Osisigxina Yokuhlala Isimo, baya kufuneka anike Yokuhlala Yethutyana Isiqinisekiso okanye kumazwe angaphandle incwadana yokundwendwela. Kuba abantu abo awunayo i-Beirut Osisigxina Yokuhlala Isimo, baya kufuneka anike Yokuhlala Yethutyana Isiqinisekiso okanye kumazwe angaphandle incwadana yokundwendwela. Kuba abantu abo awunayo i-Beirut Osisigxina Yokuhlala Isimo, baya kufuneka anike Yokuhlala Yethutyana Isiqinisekiso okanye kumazwe angaphandle incwadana yokundwendwela. Kuba abantu abo awunayo i-Beirut Osisigxina Yokuhlala Isimo, baya kufuneka anike Yokuhlala Yethutyana Isiqinisekiso okanye kumazwe angaphandle incwadana yokundwendwela. Beirut Century Real Estate ingaba ezikhokelela Beirut real estate-arhente inkampani, ukuqhagamshela Beirut real estate ipropati abanini-mhlaba kwaye brokers ukuba tenants, brokers kwaye abatyali-mali. Beirut Century Real Estate inikezela Beirut real estate iimveliso neenkonzo imida kwindawo expatriate kwaye wobulali iimfuno i-Beirut real estate ishishini. Beirut Century Real Estate specializes kuzo zonke Beirut zokuhlala real estate, Beirut-ofisi, Beirut abarhwebayo ipropati, Beirut oluphezulu suites, Beirut abarhwebayo real estate, Beirut-mveliso nezakhiwo, i-Beirut Century Real Estate yakho omnye Beirut real estate-arhente kuba Beirut zokuhlala kwiipropati kuquka Beirut apartment, villa kwaye courtyard kuba kukrazulwa kwaye kuba ziyathengiswa, kwaye abarhwebayo real estate kwaye abarhwebayo ipropati kuquka Beirut-ofisi, mveliso nezakhiwo, retail ipropati kwaye amashishini kuba kukrazulwa kwaye kuba ziyathengiswa. Iqonga ukuqhagamshela kwihlabathi liphela real estate ababhekisi phambili, ipropati agents, real estate kwaye immigration iiprojekthi, - mali utyalo-mali abacebisi, abatyali-mali. Thina ukulungiselela ngamazwe ipropati, immigration kwaye imfundo exhibitions imida ukuba iimfuno zabantu i-exhibitors kwaye visitors.
ukunyanzeliswa proceeding - China Umthetho Elithetha
Кеңсе бас адвокаттың